Knowled Archives - Shwe Khit
အအေးဗူးတှေ ဘီယာဗူး တှဖေောကျတော့မယျ ဆိုရငျ ဒီအခကျြကိုမဖွဈမနသေတိထားပါ
November 9, 2021 by Zaw Hein
အသကျကိုဉာဏျစောငျ့တယျဆိုတဲ့စကားအတိုငျးသငျ့အနနေဲ့မဖွဈမနသေိထားသငျ့ပါတယျတခါတလေ အငျတာနကျသုံးနရေငျးနဲ့ရူးကွောငျကွောငျသတငျး တှဖေူ့းကွမှာပါ။ ဘယျလိုမြိုးတှလေညျးဆိုတော့ မိသားစု အကုနျလုံး soda ဘူးဖောကျသောကျရငျးအဆိပျသငျ့သလိုဖွဈပွီးသသှေားတယျဆိုတဲ့ သတငျးလိုမြိုးပေါ့။
ဒါပမေယျ့ အခုပွောပွခငျြတာက တကယျသနေိုငျလား?မသနေိုငျဘူးလား?မသဘေူးဆိုရငျကောဘယျလိုဆိုးကြိုးတှဖွေဈနိုငျလညျး? ဘယျလိုရှောငျကဉျြသငျ့သလညျး?ဆိုတာမြိုးတှဖွေဈပါတယျ။တဈခုလောကျမေးကွညျ့ခငျြပါတယျ။ရိုးရိုးသားသားဖွကွေတာပေါ့။အိမျကနအေဝေးရောကျနတေဲ့အခါမြိုးတှမှော သံဘူးနဲ့လုပျထားတဲ့ အအေးတှေ၊ဆိုဒါတှေ၊
ဘီယာဘူးတှကေိုသောကျတဲ့အခါမှာ ဒီအတိုငျးဖောကျပွီးတော့ သံဘူးနဲ့ဘဲသောကျဖွဈကွပါသလား?မဖောကျသောကျခငျတုနျးက မသနျ့ရှငျးမှာစိုးလို့ဆိုပွီး မကျြနှာပွငျ တဝိုကျကို Tissue နဲ့သုတျမိကွပါသလား?အဲ့လောကျနဲ့သနျ့ရှငျးသှားပွီလို့ထငျလိုကျပါသလား? ကဲ အဲ့ဒါတှအေကုနျလုံးအတှကျ အဖွတှေကေိုအောကျမှာ
သံဘူး တှအေကုနျလုံးကို စကျရုံ ကနထေုတျလိုကျပွီဆိုကတညျးက ပလတျစတဈတှနေဲ့ထုတျပိုးထားခဲ့ပါတယျ။ဘာလို့လညျးဆိုတော့ အခွား ဖုနျတှေ အညဈအကွေးတှမေတကျနိုငျအောငျပွုလုပျထားတာဖွဈပါတယျ။ အဲ့ဒီအနအေထားအတိုငျးဘဲ စူပါမားကတျတှကေိုပို့ဆောငျပါတယျ။သံဘူးတှဟော စူပါမားကတျတှရေဲ့ အရောငျးစငျတှမှောရကျပေါငျးမြားစှာ ရှိနတောကွောငျ့ အခြို့သောဖုနျတှတေကျနနေိုငျပါတယျ။
ဒါကွောငျ့ မသောကျခငျမှာသနျ့ရှငျးရေးလုပျပေးတာအကောငျးဆုံးပါဘဲ။ ဒါပမေယျ့ အမှနျတကယျကတော့ သံဘူးတှအေရမျးညဈပတျနလေို့ဆိုပွီး ဆပျပွာမှုနျ့တှသေုံးပွီးတိုကျခြှတျဆေးကွောတာကတော့ လုံးဝမလိုအပျတဲ့နညျးလမျးဘဲဖွဈပါတယျ။ဘာဘဲဖွဈဖွဈပါ၊ နောကျတဈခါ သံဘူးတှကေိုဖှငျ့သောကျတော့မယျဆိုရငျအခုပွောမယျ့အခကျြလေးတှကေို ထညျ့သှငျးစဉျးစားပေးပါ။
– သံဘူးကိုသနျ့ရှငျးပေးပါ။ ဘာလို့လညျးဆိုတော့ စတိုးဆိုငျမှာဘယျလိုပုံစံမြိုးနဲ့ဘယျအခြိနျထဲကသိမျးထားတယျဆိုတာကို သငျမသိနိုငျလို့ပါဘဲ။
– Tissue သုံးမယျဆိုရငျလညျး တဈခုသိထားရမှာက Tissue က ဖုနျတှကေိုဘဲဖယျရှားပေးနိုငျတာပါ။ပိုးတော့မသတျပေးနိုငျပါဘူး။
– သံဘူးက ကောငျးကောငျးမှနျမှနျအနအေထားနဲ့ရှိနသေလားဆိုတာကိုသခြောစဈဆေးပါ။ သံခြေးတကျနလေား?ပကျြစီးနလေား?ပိနျရှုံ့နသေလား?
– သံဘူးဟာဖောငျးကွှနတေယျဆိုရငျတော့ မသငျ့တငျ့တဲ့ ပိုးသတျနညျးကိုအသုံးပွုထားတာကွောငျ့ညဈနှမျးနမှောဖွဈပါတယျ။ အကယျ၍မြား သံဘူးရဲ့ဘေးမှာ အပေါကျသေးသေးလေးတှရှေိနတောကွောငျ့ဆိုရငျလညျး
– ပကျြစီးနတေယျဆိုရငျတော့ အတှငျးပိုငျးကအရာတှဟောအရညျတှနေဲ့သတ်ထုတှကေိုပေါငျးစပျသှားစနေိုငျ
တာကွောငျ့ အန်တရာယျရှိပါတယျ။ သတ်ထုကသာ သံခြေးတကျနမေယျဆိုရငျ အဲ့ဒီသံခြေးဟာအရညျတှနေဲ့ရောသှားပွီး မသောကျသုံးသငျ့တော့ပါဘူး။
နောကျဆုံးပွောပွခငျြတာကတော့ အကွံဉာဏျရိုးရိုးလေးတဈခုပေးခငျြပါတယျ။ သငျကိုယျတိုငျလညျး အငျတာနကျမှာရှာဖှတှေရှေိ့သမြှကိုအလုံးစုံယုံစရာမလိုပါဘူး။ အခုအကွောငျးအရာလညျးအပါအဝငျပေါ့။
ဒါပမေယျ့ တဈခုတော့စဉျးစားကွညျ့ပါ။ သငျကိုယျတိုငျကကို အဲ့ဒီသံဘူးတှဟောစတိုးဆိုငျတှေ၊စတိုခနျးတှထေဲမှာဘယျလိုသိမျးဆညျးခံထားရသလညျးဆိုတာကိုမသိနိုငျတဲ့အတှကျကွောငျ့မို့လို့အသုံးမပွုခငျမှာ သနျ့ရှငျးရေးပွုလုပျပွီးမှသောကျသုံးတာအကောငျးဆုံးပါဘဲ။ နောကျတဈနညျးအနနေဲ့ဆိုရငျတော့ တခွားပုလငျးထဲ(သို့)ခှကျတခုခုထဲကိုတဆငျ့ပွောငျးလဲပွီးမှ သောကျသုံးတာလညျးအကောငျးဆုံးဘဲဖွဈပါတော့တယျ။
အသက်ကိုဉာဏ်စောင့်တယ်ဆိုတဲ့စကားအတိုင်းသင့်အနေနဲ့မဖြစ်မနေသိထားသင့်ပါတယ်တခါတလေ အင်တာနက်သုံးနေရင်းနဲ့ရူးကြောင်ကြောင်သတင်း တွေ့ဖူးကြမှာပါ။ ဘယ်လိုမျိုးတွေလည်းဆိုတော့ မိသားစု အကုန်လုံး soda ဘူးဖောက်သောက်ရင်းအဆိပ်သင့်သလိုဖြစ်ပြီးသေသွားတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းလိုမျိုးပေါ့။
ဒါပေမယ့် အခုပြောပြချင်တာက တကယ်သေနိုင်လား?မသေနိုင်ဘူးလား?မသေဘူးဆိုရင်ကောဘယ်လိုဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်လည်း? ဘယ်လိုရှောင်ကျဉ်သင့်သလည်း?ဆိုတာမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်။တစ်ခုလောက်မေးကြည့်ချင်ပါတယ်။ရိုးရိုးသားသားဖြေကြတာပေါ့။အိမ်ကနေအဝေးရောက်နေတဲ့အခါမျိုးတွေမှာ သံဘူးနဲ့လုပ်ထားတဲ့ အအေးတွေ၊ဆိုဒါတွေ၊
ဘီယာဘူးတွေကိုသောက်တဲ့အခါမှာ ဒီအတိုင်းဖောက်ပြီးတော့ သံဘူးနဲ့ဘဲသောက်ဖြစ်ကြပါသလား?မဖောက်သောက်ခင်တုန်းက မသန့်ရှင်းမှာစိုးလို့ဆိုပြီး မျက်နှာပြင် တဝိုက်ကို Tissue နဲ့သုတ်မိကြပါသလား?အဲ့လောက်နဲ့သန့်ရှင်းသွားပြီလို့ထင်လိုက်ပါသလား? ကဲ အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးအတွက် အဖြေတွေကိုအောက်မှာ
သံဘူး တွေအကုန်လုံးကို စက်ရုံ ကနေထုတ်လိုက်ပြီဆိုကတည်းက ပလတ်စတစ်တွေနဲ့ထုတ်ပိုးထားခဲ့ပါတယ်။ဘာလို့လည်းဆိုတော့ အခြား ဖုန်တွေ အညစ်အကြေးတွေမတက်နိုင်အောင်ပြုလုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအနေအထားအတိုင်းဘဲ စူပါမားကတ်တွေကိုပို့ဆောင်ပါတယ်။သံဘူးတွေဟာ စူပါမားကတ်တွေရဲ့ အရောင်းစင်တွေမှာရက်ပေါင်းများစွာ ရှိနေတာကြောင့် အချို့သောဖုန်တွေတက်နေနိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် မသောက်ခင်မှာသန့်ရှင်းရေးလုပ်ပေးတာအကောင်းဆုံးပါဘဲ။ ဒါပေမယ့် အမှန်တကယ်ကတော့ သံဘူးတွေအရမ်းညစ်ပတ်နေလို့ဆိုပြီး ဆပ်ပြာမှုန့်တွေသုံးပြီးတိုက်ချွတ်ဆေးကြောတာကတော့ လုံးဝမလိုအပ်တဲ့နည်းလမ်းဘဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ်ပါ၊ နောက်တစ်ခါ သံဘူးတွေကိုဖွင့်သောက်တော့မယ်ဆိုရင်အခုပြောမယ့်အချက်လေးတွေကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပေးပါ။
– သံဘူးကိုသန့်ရှင်းပေးပါ။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ စတိုးဆိုင်မှာဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ဘယ်အချိန်ထဲကသိမ်းထားတယ်ဆိုတာကို သင်မသိနိုင်လို့ပါဘဲ။
– Tissue သုံးမယ်ဆိုရင်လည်း တစ်ခုသိထားရမှာက Tissue က ဖုန်တွေကိုဘဲဖယ်ရှားပေးနိုင်တာပါ။ပိုးတော့မသတ်ပေးနိုင်ပါဘူး။
– သံဘူးက ကောင်းကောင်းမွန်မွန်အနေအထားနဲ့ရှိနေသလားဆိုတာကိုသေချာစစ်ဆေးပါ။ သံချေးတက်နေလား?ပျက်စီးနေလား?ပိန်ရှုံ့နေသလား?
– သံဘူးဟာဖောင်းကြွနေတယ်ဆိုရင်တော့ မသင့်တင့်တဲ့ ပိုးသတ်နည်းကိုအသုံးပြုထားတာကြောင့်ညစ်နွမ်းနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်၍များ သံဘူးရဲ့ဘေးမှာ အပေါက်သေးသေးလေးတွေရှိနေတာကြောင့်ဆိုရင်လည်း
– ပျက်စီးနေတယ်ဆိုရင်တော့ အတွင်းပိုင်းကအရာတွေဟာအရည်တွေနဲ့သတ္ထုတွေကိုပေါင်းစပ်သွားစေနိုင်
တာကြောင့် အန္တရာယ်ရှိပါတယ်။ သတ္ထုကသာ သံချေးတက်နေမယ်ဆိုရင် အဲ့ဒီသံချေးဟာအရည်တွေနဲ့ရောသွားပြီး မသောက်သုံးသင့်တော့ပါဘူး။
နောက်ဆုံးပြောပြချင်တာကတော့ အကြံဉာဏ်ရိုးရိုးလေးတစ်ခုပေးချင်ပါတယ်။ သင်ကိုယ်တိုင်လည်း အင်တာနက်မှာရှာဖွေတွေ့ရှိသမျှကိုအလုံးစုံယုံစရာမလိုပါဘူး။ အခုအကြောင်းအရာလည်းအပါအဝင်ပေါ့။
ဒါပေမယ့် တစ်ခုတော့စဉ်းစားကြည့်ပါ။ သင်ကိုယ်တိုင်ကကို အဲ့ဒီသံဘူးတွေဟာစတိုးဆိုင်တွေ၊စတိုခန်းတွေထဲမှာဘယ်လိုသိမ်းဆည်းခံထားရသလည်းဆိုတာကိုမသိနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အသုံးမပြုခင်မှာ သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ပြီးမှသောက်သုံးတာအကောင်းဆုံးပါဘဲ။ နောက်တစ်နည်းအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ တခြားပုလင်းထဲ(သို့)ခွက်တခုခုထဲကိုတဆင့်ပြောင်းလဲပြီးမှ သောက်သုံးတာလည်းအကောင်းဆုံးဘဲဖြစ်ပါတော့တယ်။
Categories Knowled Leaveacomment
ကိုယျ့ကိုယျကို အပြိုဖျောဝငျပွီလို့ ထငျလိုကျပွီလား…?
ကိုယျ့ကိုယျကို အပြိုဖျောဝငျပွီလို့ ထငျလိုကျပွီလား…?ဒါဆိုရငျ ဒီစာလေးဖတျပါ…….
ကိုယျ့ကိုယျကို အပြိုဖျောဝငျပွီလို့ ထငျလိုကျပွီလား…? ပြိုမတေို့ဟာ မိုးလငျးလို့ အိပျရာကထလိုကျတာနဲ့ အိပျရာခငျးပျေါမှာ ဘာတှမေ့လဲ၊လုံခညျြမှာ ဘာတှမေ့လဲလို့
စိုးရိမျစိတျနဲ့ ရငျတှဖေိုရတာရယျ၊ မှနျထဲ ကွညျ့လိုကျခြိနျမှာ ငါ့ကိုယျခန်ဓာ ဘယျလောကျမြားဖှံ့ထှားပွီး စှငျ့ကားလာပွီလဲလို့ သုံးသပျရတာရယျ
ဖွဈလာပွီဆိုရငျထငျတဲ့အတိုငျး အပြိုရိုငျးစိတျတှေ ဝငျလာပွီလို့သာ မှတျလိုကျတော့။ စိတျကူးတှေ ယဉျခငျြလာတာကနေ
ကြောငျးရောကျရငျ ငါ့ကိုကွညျ့သူတှေ ရှိရဲ့လား၊သတိထားသူတှေ ရှိပါ့မလားလို့ စိတျကစားတာ၊ အရှယျတူယော ကျြားလေးတှေ ရဲ့ ဂရုစိုကျကွညျ့တာမြားခံလိုကျရရငျ ရငျထဲမှာ သိမျ့သိမျ့ တုနျလောကျအောငျ
ဖွဈသှားတာတှဟောလညျး ငါဘာလဲ ဆိုတာ ကွညောလိုကျသလို ဖွဈသှားပါ တော့တယျ။ ဒီအခြိနျ အရှယျတှမှော မိဘတှအေတှကျတော့ အတျောလေး သောကပှားရတော့မယျလို့သာ မှတျလိုကျတော့။
ကိုယျက မိဘအရှယျ ရောကျလာပွီ၊ ကိုယျလညျး တဈခြိနျတုနျးက ရငျခုနျမှုတှေ ခံစားခဲ့ရပမေယျ့ကိုယျ့ သမီးလေးကိုတော့ နားလညျနိုငျအောငျ အတျောလေးကွိုးစား ပေးရဦးမှာပါ။
အပြိုဖျောဝငျလာရငျ ကိုယျခန်ဓာ အရှယျအခြိုးအစား အမြိုးမြိုးပွောငျးလဲ လာပါတော့တယျ။ စိတျမသကျမသာ ဖွဈခွငျး၊ တုနျလှုပျခြောကျခြားခွငျးတှဖွေဈလာတယျ။ ဒါဟာ မဟိုမုနျးတှပွေောငျးလဲ လာတာကွောငျ့ ဖွဈပါ တယျ။
စိတျထဲမှာ မအီမသာနဲ့ အလိုမကြ ဖွဈနတောကို မိဘတှကေလညျး နားလညျပေးမယျ… ဒီလိုဖွဈတတျကွောငျးကို အသိလညျး ပေးထားနိုငျလောကျအောငျ မိဘတှမှော ဗဟုသုတရှိရငျ ကောငျးပါတယျ။
အပြိုဖျောဝငျစ အရှယျဆိုတာ ၁၃ နှဈကနေ စပါတယျ။ ဒီအခြိနျမှာ ပြိုမတေို့ ကိုယျအလေးခြိနျ တကျလာမယျ။ ပွားခပျြခပျြ ခါးမတျမတျကနေ၊ အကောကျ အကှေ့ အမို့အမောကျတှနေဲ့ ဖွဈလာတော့မယျ။
ပခုနျးတှေ ကယျြလာ၊ တငျပါးတှေ မောကျလာ၊ ရငျသားတှတေငျးလာတာကတော့ အထငျရှားဆုံး လက်ခဏာတှပေါ။ လှနျခဲ့တဲ့ ၂ နှဈ၊ ၃ နှဈကထကျ ဖှံ့ဖွိုးမှုဟာ တဈဟုနျထိုး ဖွဈလောကျအောငျ သိသာတယျလို့ ဆိုနိုငျတယျ။
အရပျအမောငျးတှမွေငျ့လာတယျ။ ရငျသားတှေ အခံရ ခကျလောကျအောငျ ရောငျကိုငျးလာတာမြိုးတှေ ဖွဈလာ လိမျ့မယျ။ မကွာမီ ကွီးထှားလာတော့မယျ့ နိမိတျတှပေေါ့။ တဈခါတဈလေ
ရငျသားတဈဖကျက အခွား တဈဖကျထကျပိုပွီးကွီး ထှားလာတာမြိုးလညျး ကွုံရနိုငျ တယျ။ ဒါကိုလညျး စိုးရိမျသောကဖွဈစရာ မလိုဘူး၊နောကျတော့ ပွလေညျသှားလိမျ့မယျ။ မိနျးကလေးတှဟော ၁၀ နှဈကြျော လာတာနဲ့
ဖှံ့ဖွိုးမှုနှုနျးဟာမွငျ့လာတယျ။ ဒါကိုလူကွီးတှကေ အခြိုးမကြ ခှတီးခှတ အနနေဲ့ မကျြစိထဲမှာ မွငျတတျကွတယျ။ ဖှံ့ဖွိုးမှုနောကျမှာစိတျအလိုမကမြှုတှေ၊ စိတျရှုပျထှေး နမှေုတှလေညျးဖွဈနတေတျသေးတယျ။
အပြိုဖျောဝငျ လိုကျတာနဲ့အခွားသှငျပွငျလက်ခဏာတှဖွေဈတဲ့ ခြိုငျးမှေး၊ ခွသေလုံးမှေး၊ လကျမောငျး လကျဖြံတှမှောပါ အမှေးနုလေးတှေ ထှကျလာတာနဲ့ ရငျဆိုငျရလိမျ့မယျ။
ဒါဆိုရငျ အပြိုလေးဘ၀ နဂိုသှေးကွှဖို့ အခြိနျရောကျပွီလို့ အခကျြပေးလိုကျတာပါ။ မိဘတှအေနနေဲ့ဒီအခြိနျမြိုး မှာ ဖွသေိမျ့ပေးခွငျး၊ နားလညျအောငျကွိုးစားပေးခွငျးဟာ
အတျောလေး အရေးကွီးတဲ့ အခြိနျလညျးဖွဈပါတယျ။ ရငျသားတှစေပွီး ဖှံ့ဖွိုးလာတဲ့အခြိနျကစပွီး တဈနှဈ၊ နှဈနှဈအတှငျး ရာသီသှေးတှေ ဆငျးလာတော့မယျ။အမလေုပျ
သူတှအေတှကျ ဘယျလိုအကွောငျး ကွောငျ့ ရာသီသှေးဆငျးရတယျ၊ ဘယျလိုအကာအကှယျ
ပွုရမယျဆိုတာလကျဦး ဆရာတဈယောကျပမာ သှနျသငျပွသရပါတော့မယျ။ အလှယျဆုံးနဲ့အရိုးဆုံး၊ ကွောကျစရာ မကောငျးအောငျရှငျးပွနညျးကိုသာ ကငျြ့သုံးသငျ့တယျ။ ရာသီသှေး ဆငျးတယျဆိုတာ ခန်ဓာကိုယျက
မလိုအပျတဲ့အရာ တဈခုကို စှနျ့ထုတျလိုကျခွငျးသာဖွဈတယျ။ ကိုယျထဲမှာရှိတဲ့ သားအိမျက အမြိုးသမီးတှရေဲ့ ဓမ်မတာ သားသမီးရနိုငျအောငျ သှေးသဈလောငျးပွီးသှေးဟောငျးစှနျ့ထုတျတဲ့ စနဈကို
သဘာဝ အတိုငျးပွုလုပျရတယျ။ သာားးအိမျကနပွေီး မမြိုးဥကိုထုတျလှတျလိုကျခြိနျမှာ သားအိမျပွှနျ ကနကေလြာပွီး ကွီးထှားလာတတျတယျ။ ဒီလိုအစဉျမပွတျကလြာတဲ့ မြိုးဥတှဟော မအောငျမွငျမှုတှေ
မြားလာရငျ သားအိမျထဲမှာ မလိုအပျတော့တာကွောငျ့သှေးတှနေဲ့ပေါငျးစပျပွီး ဆငျးလာရတယျ။ ဒါကို ရာသီလာတယျလို့ချေါတယျ။ ၅ ရကျကနေ ၇ ရကျခနျ့အထိ ကွာတတျတယျ။
ရာသီဆငျးပွီး နှဈပတျလောကျ ကွာရငျ မြိုးဥအသဈတှကေိုထပျထုတျပွီး ဒီလိုပဲ သံသရာပွနျလညျနလေိမျ့မယျ။ အမြိုးသမီးဖွဈရတဲ့ ဘဝမှာ သဘာဝတရားက မိခငျလောငျးအဖွဈ ဖနျတီးပေးထားတာကွောငျ့
ဒီအဖွဈမြိုးကိုမလှဲမသှေ ခံစားရလိမျ့မယျ ဆိုတာကို မိဘကလညျးသိ၊ သားသမီးကိုလညျးသိစရေငျ ပွဿနာမဖွဈစနေိုငျပါဘူး။ရာသီသှေးဆငျးခြိနျမှာ ကိုယျ့သမီးအတှကျ အတှငျးခံအပို၊ အမြိုးသမီးလစဉျ
သုံးပစ်စညျး၊တဈသြှူး အပိုတှကေ အစ ဆောငျသှားတတျ၊ သုံးတတျအောငျ မိခငျတှကေ အဆငျ့ဆငျ့ လကျဆငျ့ကမျးပေး နိုငျရပါလိမျ့မယျ။ စနဈကကြ၊ နညျးလမျးကကြနြဲ့ ဖွဈနိုငျတာတှကေိုလညျးရှငျးပွ ပွောပွရငျ
ရာသီစလာခြိနျနဲ့ကွုံလိုကျရတဲ့အပြိုဖျောဝငျစ သမီးလေးတှမှော စိတျဆငျးရဲခွငျး၊ စိတျဒုက်ခရောကျခွငျးဘေးက ကငျးဝေးနိုငျပါလိမျ့မယျ။ တဈကိုယျရေ သနျ့ရှငျးရေး၊ အသုံးပွုစဉျ သနျ့ရှငျးရေးတှကေိုပါ
စိတျရှညျလကျရှညျ သုံးပွ လမျးညှနျပွ နိုငျမယျ ဆိုရငျ ပိုကောငျးပါတယျ။ ခန်ဓာကိုယျမှာရှိတဲ့ ဟိုမုနျးဓာတျတှရေဲ့ တှနျးထိုးဆောငျ့ဆှဲတာကို ခံနရေတဲ့ ပြိုမလေေးတှအေဖို့ ရငျသားနဲ့ဝမျးဗိုကျနရောတှမှော အထိမခံ
နိုငျလောကျအောငျ ဖွဈလာတတျတယျ။ စိတျကသိကအောကျနဲ့ အပွငျ မထှကျခငျြ၊ကြောငျးမသှားခငျြ ဖွဈလာတတျတယျ။ လူဝလာတာထကျ၊ ဝကျခွံတှထှေကျလာတာကို ပိုပွီး စိတျဆငျးရဲတတျတယျ။
စိတျလှုပျရှားလှနျးတာကွောငျ့ရယျ၊ ဟိုမုနျးအပွောငျးအလဲမှာ ခံစားလာရတာဖွဈလို့ စိုးရိမျစရာတော့ မလိုပါဘူး။ သိပျပွီး ဝကျခွံတှထှေကျတာ မြားလှနျးရငျတော့ ဆရာဝနျထံသှားပွီး ပွသကုသ ပေးသငျ့တယျ။
ရာသီလာစဉျမှာ ကိုကျခဲမှုကို ခံစားရရငျတော့ ပါရာစီတမော ဆေးလောကျ သောကျတာ ပွဿနာကငျးတယျလို့ ဆိုပါတယျ။ ဗီတာမငျ B6 ဓာတျပါတဲ့ အစားအစာတှစေားမယျ၊ လကေ့ငျြ့ခနျး လုပျမယျ၊ ရနှေေးနဲ့ ရခြေိုးမယျ ဆိုရငျလညျး
ပြောကျကငျးစနေိုငျတယျလို့ ဆိုပါတယျ။ ရနှေေးပုလငျးကို ဝမျးဗိုကျပျေါမှာ တငျထားရငျလညျး သကျသာတယျလို့ ပွောကွတယျ။ဖြျောရညျတဈမြိုးမြိုးကို ပူပူနှေးနှေးလေးဖွဈအောငျလုပျပွီး သောကျလိုကျရငျ လညျးပြောကျနိုငျတယျ။
နားလညျ တတျကြှမျးတဲ့ ဆရာဝနျတှရေဲ့ အကွံကိုယူတာတော့ အကောငျးဆုံးပဲ ဆိုတာ မမပေ့ါနဲ့။ဝကျခွံပြောကျအောငျ လုပျဖို့ကတော့ နညျးနညျးခကျတယျ။ သကျသာအောငျ လုပျနိုငျတဲ့နညျးတှတေော့ အမြားကွီးရှိ ပါတယျ။
မကျြနှာကို သနျ့စငျအောငျဆေးကွောတာကတော့ အဓိကကပြါတယျ။ မကျြနှာပျေါမှာ အဆီနဲ့ပိုးမှားတှကေငျးရငျ ပြောကျကငျးဖို့လမျးမြားတယျ။ဝကျခွံကို မညှဈဖို့လိုတယျ။ အနာဖွဈပွီး အမာရှတျ
ကနျြသှားရငျ ပိုပွီးရုပျဆိုးစနေိုငျတယျ။ ရမြေားမြားသောကျမယျ။ အသီးအနှံမြား မြားစားမယျ။ ငါးပိ၊ ငါးခွောကျ စတဲ့ အငနျဓာတျမြားတဲ့ အစားအစာတှကေို အဓိကရှောငျမယျ။
မကျြနှာလေးကို အမွဲတမျးစိုနအေောငျ ဂရုစိုကျ ထားမယျဆိုရငျ ဝကျခွံပြောကျသှားနိုငျပါလိမျ့မယျ။ ခန်ဓာကိုယျ အပွောငျးအလဲတှမြေားလာရငျ ဆယျကြျောသကျတှေ ကိုယျ့ကိုယျကို သိပျပွီးသတိထား လာတတျကွတယျ။
တီဗှီတှေ၊ မဂ်ဂဇငျးတှကေရုပျပုံတှေ ဓာတျပုံတှကေို စိတျဝငျစားလာကွတယျ။ ကနျြးမာ ဝဖွိုးတဲ့ ခန်ဓာကိုယျအခြိုးအစားထကျမျောဒယျတှလေို သှားကွားထိုးတံ လမျးလြှောကျလာသလို ပိနျကပျကပျ ပုံစံတှကေို မကျြစိကလြာပွီး ….
အစားလြှော့တော့မယျလို့ ပွောမလာအောငျ မိဘတှကေ ကနျြးမာရေး ရှုထောငျ့က နပွေီး မကောငျးတဲ့အခကျြတှကေို ရှငျးပွရလိမျ့မယျ။ဖှံ့ဖွိုးစအရှယျမှာ ဖှံ့ဖွိုးစဖေို့ပဲလိုတယျ။ ထိနျးခြုပျမှုတှကေို
မလိုအပျဘဲ သှားလုပျလိုကျရငျ ဘေးတှစေ့နေိုငျပါတယျ။ မိဘတှေ သောကအမြားရဆုံးကတော့ (…)မှုကိစ်စဖွဈပါတယျ။အပြိုဖျော ဝငျလာတာနဲ့ ဆနျ့ကငျြဖကျ(…..)ကို စိတျဝငျစားလာပါလိမျ့မယျ။
မိနျးကလေးတှေ အနနေဲ့ စိတျလှုပျရှားလာလှနျးတာကွောငျ့ လတေိုကျလို့ သဈရှကျ လှုပျတာကွညျ့ပွီးတော့တောငျငိုခငျြငိုနတေတျတဲ့အခြိနျ ဖွဈပါတယျ။ ဒီအခြိနျမှာ အပြိုဖျောဝငျစစိတျဟာ သိပျထငျရှားပါတယျ။
ခဈြခငျြတယျ၊ အခဈြခံခငျြတယျ… မနာလိုစိတျ၊ ဝနျတိုစိတျတှေ ပထမဦးဆုံး အနနေဲ့ ပျေါလာတတျတယျ။ မသိမှုနယျပယျထဲကို တိုးဝငျခငျြတဲ့ ဆန်ဒတှေ လှနျကဲလာတတျတယျ။
ကိုယျဝနျဆောငျခွငျး၊ သန်ဓတေားခွငျး၊ ဆကျဆံခွငျးတှအေပျေါ စိတျဝငျစားလာတတျသလို စမျးသပျခငျြတဲ့ ဆန်ဒတှလေညျး ဖွဈပျေါလာတတျတယျ။အကောငျးအဆိုး မဝခှေဲနိုငျခြိနျ ဖွဈလို့
ထိနျးသိမျးပေးနိုငျဖို့ သိပျအရေးကွီးတဲ့ အရှယျပေါ့။ ဆကျဆံလို့ဖွဈလာနိုငျတဲ့ ရောဂါတှေ၊နောကျဆကျတှဲဆိုးကြိုးတှကေို သူတို့ဘာမှ သဘောမပေါကျသေးတာကွောငျ့ လူကွီးတှကေ ရှငျးပွနိုငျဖို့
သိပျအရေးကွီးတယျ။ အတငျးအဓမ်မ ထိနျးခြုပျ တာထကျ၊ သဘောပေါကျအောငျ ရှငျးပွနိုငျရမယျ။ မိတျဆှသေူငယျခငျြး ဆိုတာဘာလဲ၊ ယောကျြားမိနျးမ အရှယျမရောကျမီဆကျဆံရေးဟာ
ဘယျလောကျအတိုငျး အတာအထိပဲ ဖွဈသငျ့သလဲ ဆိုတာတှကေို သှနျသငျညှနျပွပေးသငျ့တယျ။ သူတို့က မသိလို့မေးလာသမြှ စိတျရှညျရှညျဖွေ ကွားပေးနိုငျအောငျကွိုးစားလာရငျ ကိုယျ့
အပျေါကို ယုံကွညျအားကိုးစိတျနဲ့ အမွဲခဉျြးကပျ နလေိမျ့မယျ။ မိဘတှကေ အမွဲငေါကျငမျးပွီး ဟောကျထုတျနရေငျတော့ ကိုယျနဲ့ဝေးလေ သူတို့စိတျကို သိနိုငျဖို့ ခကျလဖွေဈတော့မယျ။မတ်ေတာတရား၊
အပွနျလေးစား ခဈြခငျမှု၊ စတေနာထား သှနျသငျညှနျပွပေးမှုတှသော အပြိုသှေးကွှနတေဲ့သမီးဖွဈသူရဲ့ဘဝကို ကိုယျ့ရဲ့ဘဝလို ဖွဈအောငျ ပွုစုပြိုးထောငျနိုငျမယျလို့ မှတျယူထားလိုကျရအောငျ။
ကိုယ့်ကိုယ်ကို အပျိုဖော်ဝင်ပြီလို့ ထင်လိုက်ပြီလား…?ဒါဆိုရင် ဒီစာလေးဖတ်ပါ…….
ကိုယ့်ကိုယ်ကို အပျိုဖော်ဝင်ပြီလို့ ထင်လိုက်ပြီလား…? ပျိုမေတို့ဟာ မိုးလင်းလို့ အိပ်ရာကထလိုက်တာနဲ့ အိပ်ရာခင်းပေါ်မှာ ဘာတွေ့မလဲ၊လုံချည်မှာ ဘာတွေ့မလဲလို့
စိုးရိမ်စိတ်နဲ့ ရင်တွေဖိုရတာရယ်၊ မှန်ထဲ ကြည့်လိုက်ချိန်မှာ ငါ့ကိုယ်ခန္ဓာ ဘယ်လောက်များဖွံ့ထွားပြီး စွင့်ကားလာပြီလဲလို့ သုံးသပ်ရတာရယ်
ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ထင်တဲ့အတိုင်း အပျိုရိုင်းစိတ်တွေ ဝင်လာပြီလို့သာ မှတ်လိုက်တော့။ စိတ်ကူးတွေ ယဉ်ချင်လာတာကနေ
ကျောင်းရောက်ရင် ငါ့ကိုကြည့်သူတွေ ရှိရဲ့လား၊သတိထားသူတွေ ရှိပါ့မလားလို့ စိတ်ကစားတာ၊ အရွယ်တူယော က်ျားလေးတွေ ရဲ့ ဂရုစိုက်ကြည့်တာများခံလိုက်ရရင် ရင်ထဲမှာ သိမ့်သိမ့် တုန်လောက်အောင်
ဖြစ်သွားတာတွေဟာလည်း ငါဘာလဲ ဆိုတာ ကြေညာလိုက်သလို ဖြစ်သွားပါ တော့တယ်။ ဒီအချိန် အရွယ်တွေမှာ မိဘတွေအတွက်တော့ အတော်လေး သောကပွားရတော့မယ်လို့သာ မှတ်လိုက်တော့။
ကိုယ်က မိဘအရွယ် ရောက်လာပြီ၊ ကိုယ်လည်း တစ်ချိန်တုန်းက ရင်ခုန်မှုတွေ ခံစားခဲ့ရပေမယ့်ကိုယ့် သမီးလေးကိုတော့ နားလည်နိုင်အောင် အတော်လေးကြိုးစား ပေးရဦးမှာပါ။
အပျိုဖော်ဝင်လာရင် ကိုယ်ခန္ဓာ အရွယ်အချိုးအစား အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲ လာပါတော့တယ်။ စိတ်မသက်မသာ ဖြစ်ခြင်း၊ တုန်လှုပ်ချောက်ချားခြင်းတွေဖြစ်လာတယ်။ ဒါဟာ မဟိုမုန်းတွေပြောင်းလဲ လာတာကြောင့် ဖြစ်ပါ တယ်။
စိတ်ထဲမှာ မအီမသာနဲ့ အလိုမကျ ဖြစ်နေတာကို မိဘတွေကလည်း နားလည်ပေးမယ်… ဒီလိုဖြစ်တတ်ကြောင်းကို အသိလည်း ပေးထားနိုင်လောက်အောင် မိဘတွေမှာ ဗဟုသုတရှိရင် ကောင်းပါတယ်။
အပျိုဖော်ဝင်စ အရွယ်ဆိုတာ ၁၃ နှစ်ကနေ စပါတယ်။ ဒီအချိန်မှာ ပျိုမေတို့ ကိုယ်အလေးချိန် တက်လာမယ်။ ပြားချပ်ချပ် ခါးမတ်မတ်ကနေ၊ အကောက် အကွေ့ အမို့အမောက်တွေနဲ့ ဖြစ်လာတော့မယ်။
ပခုန်းတွေ ကျယ်လာ၊ တင်ပါးတွေ မောက်လာ၊ ရင်သားတွေတင်းလာတာကတော့ အထင်ရှားဆုံး လက္ခဏာတွေပါ။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ နှစ်၊ ၃ နှစ်ကထက် ဖွံ့ဖြိုးမှုဟာ တစ်ဟုန်ထိုး ဖြစ်လောက်အောင် သိသာတယ်လို့ ဆိုနိုင်တယ်။
အရပ်အမောင်းတွေမြင့်လာတယ်။ ရင်သားတွေ အခံရ ခက်လောက်အောင် ရောင်ကိုင်းလာတာမျိုးတွေ ဖြစ်လာ လိမ့်မယ်။ မကြာမီ ကြီးထွားလာတော့မယ့် နိမိတ်တွေပေါ့။ တစ်ခါတစ်လေ
ရင်သားတစ်ဖက်က အခြား တစ်ဖက်ထက်ပိုပြီးကြီး ထွားလာတာမျိုးလည်း ကြုံရနိုင် တယ်။ ဒါကိုလည်း စိုးရိမ်သောကဖြစ်စရာ မလိုဘူး၊နောက်တော့ ပြေလည်သွားလိမ့်မယ်။ မိန်းကလေးတွေဟာ ၁၀ နှစ်ကျော် လာတာနဲ့
ဖွံ့ဖြိုးမှုနှုန်းဟာမြင့်လာတယ်။ ဒါကိုလူကြီးတွေက အချိုးမကျ ခွတီးခွတ အနေနဲ့ မျက်စိထဲမှာ မြင်တတ်ကြတယ်။ ဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်မှာစိတ်အလိုမကျမှုတွေ၊ စိတ်ရှုပ်ထွေး နေမှုတွေလည်းဖြစ်နေတတ်သေးတယ်။
အပျိုဖော်ဝင် လိုက်တာနဲ့အခြားသွင်ပြင်လက္ခဏာတွေဖြစ်တဲ့ ချိုင်းမွေး၊ ခြေသလုံးမွေး၊ လက်မောင်း လက်ဖျံတွေမှာပါ အမွေးနုလေးတွေ ထွက်လာတာနဲ့ ရင်ဆိုင်ရလိမ့်မယ်။
ဒါဆိုရင် အပျိုလေးဘ၀ နဂိုသွေးကြွဖို့ အချိန်ရောက်ပြီလို့ အချက်ပေးလိုက်တာပါ။ မိဘတွေအနေနဲ့ဒီအချိန်မျိုး မှာ ဖြေသိမ့်ပေးခြင်း၊ နားလည်အောင်ကြိုးစားပေးခြင်းဟာ
အတော်လေး အရေးကြီးတဲ့ အချိန်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ ရင်သားတွေစပြီး ဖွံ့ဖြိုးလာတဲ့အချိန်ကစပြီး တစ်နှစ်၊ နှစ်နှစ်အတွင်း ရာသီသွေးတွေ ဆင်းလာတော့မယ်။အမေလုပ်
သူတွေအတွက် ဘယ်လိုအကြောင်း ကြောင့် ရာသီသွေးဆင်းရတယ်၊ ဘယ်လိုအကာအကွယ်
ပြုရမယ်ဆိုတာလက်ဦး ဆရာတစ်ယောက်ပမာ သွန်သင်ပြသရပါတော့မယ်။ အလွယ်ဆုံးနဲ့အရိုးဆုံး၊ ကြောက်စရာ မကောင်းအောင်ရှင်းပြနည်းကိုသာ ကျင့်သုံးသင့်တယ်။ ရာသီသွေး ဆင်းတယ်ဆိုတာ ခန္ဓာကိုယ်က
မလိုအပ်တဲ့အရာ တစ်ခုကို စွန့်ထုတ်လိုက်ခြင်းသာဖြစ်တယ်။ ကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ သားအိမ်က အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ဓမ္မတာ သားသမီးရနိုင်အောင် သွေးသစ်လောင်းပြီးသွေးဟောင်းစွန့်ထုတ်တဲ့ စနစ်ကို
သဘာဝ အတိုင်းပြုလုပ်ရတယ်။ သာားးအိမ်ကနေပြီး မမျိုးဥကိုထုတ်လွှတ်လိုက်ချိန်မှာ သားအိမ်ပြွန် ကနေကျလာပြီး ကြီးထွားလာတတ်တယ်။ ဒီလိုအစဉ်မပြတ်ကျလာတဲ့ မျိုးဥတွေဟာ မအောင်မြင်မှုတွေ
များလာရင် သားအိမ်ထဲမှာ မလိုအပ်တော့တာကြောင့်သွေးတွေနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီး ဆင်းလာရတယ်။ ဒါကို ရာသီလာတယ်လို့ခေါ်တယ်။ ၅ ရက်ကနေ ၇ ရက်ခန့်အထိ ကြာတတ်တယ်။
ရာသီဆင်းပြီး နှစ်ပတ်လောက် ကြာရင် မျိုးဥအသစ်တွေကိုထပ်ထုတ်ပြီး ဒီလိုပဲ သံသရာပြန်လည်နေလိမ့်မယ်။ အမျိုးသမီးဖြစ်ရတဲ့ ဘဝမှာ သဘာဝတရားက မိခင်လောင်းအဖြစ် ဖန်တီးပေးထားတာကြောင့်
ဒီအဖြစ်မျိုးကိုမလွဲမသွေ ခံစားရလိမ့်မယ် ဆိုတာကို မိဘကလည်းသိ၊ သားသမီးကိုလည်းသိစေရင် ပြဿနာမဖြစ်စေနိုင်ပါဘူး။ရာသီသွေးဆင်းချိန်မှာ ကိုယ့်သမီးအတွက် အတွင်းခံအပို၊ အမျိုးသမီးလစဉ်
သုံးပစ္စည်း၊တစ်သျှူး အပိုတွေက အစ ဆောင်သွားတတ်၊ သုံးတတ်အောင် မိခင်တွေက အဆင့်ဆင့် လက်ဆင့်ကမ်းပေး နိုင်ရပါလိမ့်မယ်။ စနစ်ကျကျ၊ နည်းလမ်းကျကျနဲ့ ဖြစ်နိုင်တာတွေကိုလည်းရှင်းပြ ပြောပြရင်
ရာသီစလာချိန်နဲ့ကြုံလိုက်ရတဲ့အပျိုဖော်ဝင်စ သမီးလေးတွေမှာ စိတ်ဆင်းရဲခြင်း၊ စိတ်ဒုက္ခရောက်ခြင်းဘေးက ကင်းဝေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ တစ်ကိုယ်ရေ သန့်ရှင်းရေး၊ အသုံးပြုစဉ် သန့်ရှင်းရေးတွေကိုပါ
စိတ်ရှည်လက်ရှည် သုံးပြ လမ်းညွှန်ပြ နိုင်မယ် ဆိုရင် ပိုကောင်းပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ ဟိုမုန်းဓာတ်တွေရဲ့ တွန်းထိုးဆောင့်ဆွဲတာကို ခံနေရတဲ့ ပျိုမေလေးတွေအဖို့ ရင်သားနဲ့ဝမ်းဗိုက်နေရာတွေမှာ အထိမခံ
နိုင်လောက်အောင် ဖြစ်လာတတ်တယ်။ စိတ်ကသိကအောက်နဲ့ အပြင် မထွက်ချင်၊ကျောင်းမသွားချင် ဖြစ်လာတတ်တယ်။ လူဝလာတာထက်၊ ဝက်ခြံတွေထွက်လာတာကို ပိုပြီး စိတ်ဆင်းရဲတတ်တယ်။
စိတ်လှုပ်ရှားလွန်းတာကြောင့်ရယ်၊ ဟိုမုန်းအပြောင်းအလဲမှာ ခံစားလာရတာဖြစ်လို့ စိုးရိမ်စရာတော့ မလိုပါဘူး။ သိပ်ပြီး ဝက်ခြံတွေထွက်တာ များလွန်းရင်တော့ ဆရာဝန်ထံသွားပြီး ပြသကုသ ပေးသင့်တယ်။
ရာသီလာစဉ်မှာ ကိုက်ခဲမှုကို ခံစားရရင်တော့ ပါရာစီတမော ဆေးလောက် သောက်တာ ပြဿနာကင်းတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဗီတာမင် B6 ဓာတ်ပါတဲ့ အစားအစာတွေစားမယ်၊ လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်မယ်၊ ရေနွေးနဲ့ ရေချိုးမယ် ဆိုရင်လည်း
ပျောက်ကင်းစေနိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ရေနွေးပုလင်းကို ဝမ်းဗိုက်ပေါ်မှာ တင်ထားရင်လည်း သက်သာတယ်လို့ ပြောကြတယ်။ဖျော်ရည်တစ်မျိုးမျိုးကို ပူပူနွေးနွေးလေးဖြစ်အောင်လုပ်ပြီး သောက်လိုက်ရင် လည်းပျောက်နိုင်တယ်။
နားလည် တတ်ကျွမ်းတဲ့ ဆရာဝန်တွေရဲ့ အကြံကိုယူတာတော့ အကောင်းဆုံးပဲ ဆိုတာ မမေ့ပါနဲ့။ဝက်ခြံပျောက်အောင် လုပ်ဖို့ကတော့ နည်းနည်းခက်တယ်။ သက်သာအောင် လုပ်နိုင်တဲ့နည်းတွေတော့ အများကြီးရှိ ပါတယ်။
မျက်နှာကို သန့်စင်အောင်ဆေးကြောတာကတော့ အဓိကကျပါတယ်။ မျက်နှာပေါ်မှာ အဆီနဲ့ပိုးမွှားတွေကင်းရင် ပျောက်ကင်းဖို့လမ်းများတယ်။ဝက်ခြံကို မညှစ်ဖို့လိုတယ်။ အနာဖြစ်ပြီး အမာရွတ်
ကျန်သွားရင် ပိုပြီးရုပ်ဆိုးစေနိုင်တယ်။ ရေများများသောက်မယ်။ အသီးအနှံများ များစားမယ်။ ငါးပိ၊ ငါးခြောက် စတဲ့ အငန်ဓာတ်များတဲ့ အစားအစာတွေကို အဓိကရှောင်မယ်။
မျက်နှာလေးကို အမြဲတမ်းစိုနေအောင် ဂရုစိုက် ထားမယ်ဆိုရင် ဝက်ခြံပျောက်သွားနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ခန္ဓာကိုယ် အပြောင်းအလဲတွေများလာရင် ဆယ်ကျော်သက်တွေ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သိပ်ပြီးသတိထား လာတတ်ကြတယ်။
တီဗွီတွေ၊ မဂ္ဂဇင်းတွေကရုပ်ပုံတွေ ဓာတ်ပုံတွေကို စိတ်ဝင်စားလာကြတယ်။ ကျန်းမာ ဝဖြိုးတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားထက်မော်ဒယ်တွေလို သွားကြားထိုးတံ လမ်းလျှောက်လာသလို ပိန်ကပ်ကပ် ပုံစံတွေကို မျက်စိကျလာပြီး ….
အစားလျှော့တော့မယ်လို့ ပြောမလာအောင် မိဘတွေက ကျန်းမာရေး ရှုထောင့်က နေပြီး မကောင်းတဲ့အချက်တွေကို ရှင်းပြရလိမ့်မယ်။ဖွံ့ဖြိုးစအရွယ်မှာ ဖွံ့ဖြိုးစေဖို့ပဲလိုတယ်။ ထိန်းချုပ်မှုတွေကို
မလိုအပ်ဘဲ သွားလုပ်လိုက်ရင် ဘေးတွေ့စေနိုင်ပါတယ်။ မိဘတွေ သောကအများရဆုံးကတော့ (…)မှုကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။အပျိုဖော် ဝင်လာတာနဲ့ ဆန့်ကျင်ဖက်(…..)ကို စိတ်ဝင်စားလာပါလိမ့်မယ်။
မိန်းကလေးတွေ အနေနဲ့ စိတ်လှုပ်ရှားလာလွန်းတာကြောင့် လေတိုက်လို့ သစ်ရွက် လှုပ်တာကြည့်ပြီးတော့တောင်ငိုချင်ငိုနေတတ်တဲ့အချိန် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအချိန်မှာ အပျိုဖော်ဝင်စစိတ်ဟာ သိပ်ထင်ရှားပါတယ်။
ချစ်ချင်တယ်၊ အချစ်ခံချင်တယ်… မနာလိုစိတ်၊ ဝန်တိုစိတ်တွေ ပထမဦးဆုံး အနေနဲ့ ပေါ်လာတတ်တယ်။ မသိမှုနယ်ပယ်ထဲကို တိုးဝင်ချင်တဲ့ ဆန္ဒတွေ လွန်ကဲလာတတ်တယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်း၊ သန္ဓေတားခြင်း၊ ဆက်ဆံခြင်းတွေအပေါ် စိတ်ဝင်စားလာတတ်သလို စမ်းသပ်ချင်တဲ့ ဆန္ဒတွေလည်း ဖြစ်ပေါ်လာတတ်တယ်။အကောင်းအဆိုး မဝေခွဲနိုင်ချိန် ဖြစ်လို့
ထိန်းသိမ်းပေးနိုင်ဖို့ သိပ်အရေးကြီးတဲ့ အရွယ်ပေါ့။ ဆက်ဆံလို့ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ ရောဂါတွေ၊နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေကို သူတို့ဘာမှ သဘောမပေါက်သေးတာကြောင့် လူကြီးတွေက ရှင်းပြနိုင်ဖို့
သိပ်အရေးကြီးတယ်။ အတင်းအဓမ္မ ထိန်းချုပ် တာထက်၊ သဘောပေါက်အောင် ရှင်းပြနိုင်ရမယ်။ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်း ဆိုတာဘာလဲ၊ ယောက်ျားမိန်းမ အရွယ်မရောက်မီဆက်ဆံရေးဟာ
ဘယ်လောက်အတိုင်း အတာအထိပဲ ဖြစ်သင့်သလဲ ဆိုတာတွေကို သွန်သင်ညွှန်ပြပေးသင့်တယ်။ သူတို့က မသိလို့မေးလာသမျှ စိတ်ရှည်ရှည်ဖြေ ကြားပေးနိုင်အောင်ကြိုးစားလာရင် ကိုယ့်
အပေါ်ကို ယုံကြည်အားကိုးစိတ်နဲ့ အမြဲချဉ်းကပ် နေလိမ့်မယ်။ မိဘတွေက အမြဲငေါက်ငမ်းပြီး ဟောက်ထုတ်နေရင်တော့ ကိုယ်နဲ့ဝေးလေ သူတို့စိတ်ကို သိနိုင်ဖို့ ခက်လေဖြစ်တော့မယ်။မေတ္တာတရား၊
အပြန်လေးစား ချစ်ခင်မှု၊ စေတနာထား သွန်သင်ညွှန်ပြပေးမှုတွေသာ အပျိုသွေးကြွနေတဲ့သမီးဖြစ်သူရဲ့ဘဝကို ကိုယ့်ရဲ့ဘဝလို ဖြစ်အောင် ပြုစုပျိုးထောင်နိုင်မယ်လို့ မှတ်ယူထားလိုက်ရအောင်။
ရနျကုနျ…နပွေညျတျော…မန်တလေးအမွနျလမျး ( သို့ မဟုတျ) ၃၆၆ မို ငျ ၃ ဖာလုံ
October 29, 2021 by Zaw Hein
မိတျ ဆှတှေအေတှကျ သိနပွေီးသား ဖွဈနိုငျပမေဲ့ တနှဈတဈခေါကျလောကျ ရုံးပိတျရကျ သှားမဲ့ မိတျဆှတှေေ မသိတဲ့ နရောလေးတှရှေိခဲ့ရငျ အသုံးဝငျခဲ့ရငျ ကနြျော လကျညောငျးရကြိုးနပျပါပွီ။
ဒီမိုငျတိုငျ ( ၃၆၆/ ၃ မိုငျ )အတှငျးမှာနရောတှေ အမြားကွီးပါ ….ဒီထဲက ကနြျော မှတျသားထားတာလေးတှေ ခေါငျးစဉျတဈခုဆီအောကျမှာ ရှယျပေးခငျြပါတယျ။
အမွနျလမျးမှာ အရေးအကွီးဆုံးပါ…..ကိုယျ့အရှိနျကို မထိနျးနိုငျပဲ အိပျမငိုကျပဲနဲ့ မှောကျတာ အကှတှေ့မှောပါ…..
••၂၄၂ အကှအေ့ကွမျးဆုံး သတိပွုရမဲ့အကှေ့••££££##
၂။ဂငယျကှေ့…အမွနျမောငျးနတေဲ့ လမျးမှာ ရှကေ့ားဂငယျကှရေ့ငျ အရမျးသတိထားရပါတယျ….
•၁၅မိုငျဘရားကွီးအနီး ဘုရားဖူးကားတှေ ရနျကုနျပွနျဖို့ ဂငယျပွနျကှကွေ့တယျ…
၁၁၀-၁၄၇ ကွားမှာ ကြှဲအုပျ နှားအုပျတှေ ဖွတျသနျးသှားလာပါတယျ။ သတိထားပါ ။တိုကျမိရငျ ပိုငျရှငျစုံစမျးမရပါ။
ဟိုဘကျဒီဘကျ ကြေးရှာရှိတဲ့ နရောတှမှော အဓိက ဖွတျသနျးပါတယျ ။
၁၃မိုငျ – မိုငျတိုငျ ၂ဝကွား
၁၄ရမိုငျ- မိုငျတိုငျ ၁၅၃ကွား (တောငျငူ-ကတေုမနီ)
၂၅၆မိုငျ – မိုငျတိုငျ ၂၆၂ကွား( ပြျောဘှယျလမျးခှဲ)
လမျးဘေးမှာ Light truck ကားလေးရပျထားရငျသတိထားပါ ….သတိထားကွညျ့ရငျ နောကျဖုံးမှာ Highway Police စာတနျးလေးပါပါတယျ။
၆။ နယျမွကွေမျး…..မွနေရော မသနျ့ဘူးပဲ ပွောရမလား….အတိုကျအခိုကျအမြားဆုံးနဲ့ ယာဉျမောငျး အိပျအငိုကျဆုံးနရောတှပေါ….
အမွနျလမျး အသုံးပွုတဲ့ မိတျဆှတှေေ ဘေးကငျးနိုငျကွပါစေ…။
နောကျထပျ သတိမှုစရာလေးမြားကနျြခဲ့လြှငျ ဖွညျ့စှကျ ရေးသားကွပါ။ ဒီစာကိုရေးသားနိုငျတာဟာ ကနြျောတဈဦးထဲအတှအေ့ကွုံမဟုတျပါ။
ယာဉျမောငျးသကျ ၁၅နှဈကြျော ရှိတဲ့ ယာဉျမောငျး မိတျဆှကွေီး တှေ ရဲ့ အတှအေ့ကွုံတှကွေောငျ့ပါ။
လိုအပျတဲ့ နရော နဲ့ သတိပွုရနျ အခကျြမြားလညျး ထပျပွီးဖျောပွရေးသားပေးခွငျးဖွငျ့ ခရီးသှား နှငျ့ ခရီးဖျော ဘဝတူယာဉျမောငျးမြားအား ကူညီ ပေး ကွပါခငျဗြ…… !!!!!!!
မိတ် ဆွေတွေအတွက် သိနေပြီးသား ဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ တနှစ်တစ်ခေါက်လောက် ရုံးပိတ်ရက် သွားမဲ့ မိတ်ဆွေတွေ မသိတဲ့ နေရာလေးတွေရှိခဲ့ရင် အသုံးဝင်ခဲ့ရင် ကျနော် လက်ညောင်းရကျိုးနပ်ပါပြီ။
ဒီမိုင်တိုင် ( ၃၆၆/ ၃ မိုင် )အတွင်းမှာနေရာတွေ အများကြီးပါ ….ဒီထဲက ကျနော် မှတ်သားထားတာလေးတွေ ခေါင်းစဉ်တစ်ခုဆီအောက်မှာ ရှယ်ပေးချင်ပါတယ်။
အမြန်လမ်းမှာ အရေးအကြီးဆုံးပါ…..ကိုယ့်အရှိန်ကို မထိန်းနိုင်ပဲ အိပ်မငိုက်ပဲနဲ့ မှောက်တာ အကွေ့တွေမှာပါ…..
•၁၀၅ မိုင်( ရွှေလီဦး ၁ရယောက်သေ)
•၁၉၇ (ရာဇာမင်း ၉ယောက်သေ)
••၂၄၂ အကွေ့အကြမ်းဆုံး သတိပြုရမဲ့အကွေ့••££££##
မန်းလေးဘက်သွားတဲ့ဘက်မှာတော့ •၃၅၆ •၃၅၉ အကွေ့အရမ်းကြမ်းပါတယ်။
၂။ဂငယ်ကွေ့…အမြန်မောင်းနေတဲ့ လမ်းမှာ ရှေ့ကားဂငယ်ကွေ့ရင် အရမ်းသတိထားရပါတယ်….
•၁၅မိုင်ဘရားကြီးအနီး ဘုရားဖူးကားတွေ ရန်ကုန်ပြန်ဖို့ ဂငယ်ပြန်ကွေ့ကြတယ်…
၁၁၀-၁၄၇ ကြားမှာ ကျွဲအုပ် နွားအုပ်တွေ ဖြတ်သန်းသွားလာပါတယ်။ သတိထားပါ ။တိုက်မိရင် ပိုင်ရှင်စုံစမ်းမရပါ။
ဟိုဘက်ဒီဘက် ကျေးရွာရှိတဲ့ နေရာတွေမှာ အဓိက ဖြတ်သန်းပါတယ် ။
၁၃မိုင် – မ်ိုင်တိုင် ၂ဝကြား
၁၄ရမိုင်- မိုင်တိုင် ၁၅၃ကြား (တောင်ငူ-ကေတုမနီ)
၂၅၆မိုင် – မိုင်တိုင် ၂၆၂ကြား( ပျော်ဘွယ်လမ်းခွဲ)
၅။ကီလိုမီတာဖမ်း (ရဲစခန်းနဲ့ အနီးဆုံးနေရာများ)
လမ်းဘေးမှာ Light truck ကားလေးရပ်ထားရင်သတိထားပါ ….သတိထားကြည့်ရင် နောက်ဖုံးမှာ Highway Police စာတန်းလေးပါပါတယ်။
(ဒီစာပိုဒ်က စည်းကမ်းမဲ့မို့အတွက်မဟုတ်ပေမဲ့ တခါတလေ အရေးကြီးလို့ အမြန်မောင်းမိရင်ဒီနေရာတွေကို သတိမထားလို့ ရဲဖမ်းခံရရင် ပိုကြာတတ်လို့ပါ)
PS. ကျနော့် ၂၅၀၀၀၀ ဖိုး အတွေ့အကြုံပါ….
၆။ နယ်မြေကြမ်း…..မြေနေရာ မသန့်ဘူးပဲ ပြောရမလား….အတိုက်အခိုက်အများဆုံးနဲ့ ယာဉ်မောင်း အိပ်အငိုက်ဆုံးနေရာတွေပါ….
•မိုင် ၂၀ ပတ်လည်
•မိုင်တိုင် ၂၈၅-၃၃၀ ကြား
•၂၈၅-၃၃ဝကြား ညနက်ပိုင်းတစ်ယောက်ထဲ မိတ္တီလာကထွက်လာရင် သတိထားမိတယ် အဲဒီမိုင်တိုင်တွေမှာ ကျောချမ်းလာတယ်။
အကျဉ်းဖျင်း ၈မိုင်ခြားတစ်ခုအမြန်လမ်းရဲကတော့ တစ်ကယ်ချီးကျုးဖို့ကောင်းပါတယ် ။
နေပူကျဲထဲမှာ ညနက်သန်းခေါင်မှာ ကားဘီးပေါက်တာကားပျက်တာကအစ ကူညီပေးပါတယ်။
ရဲစခန်းလိပ်စာနဲ့ ဖုန်းနံပါတ်တွေကတော့ပို့တစ်ခုရှိပါတယ် လင့်ရှာပေးပါ့မယ်။
ခရီးဝေးသွားမယ်ဆို တာယာ မနှမျောပါနဲ့…အင်ဂျင်ဝိုင် ၊ရေတိုင်ဂီရေ ၊ ကားကြံခိုင်ရေး သေချာပြင်ဆင်သင့်ပါတယ်။
၁၁။ တံတားဦး လေဆိပ်အဝိုင်း
မန်းလေး တိုးဂိတ်ကျော် အရှိန်အရမ်းတင်ပြီး ညပိုင်းဆို သတိထားပါ ….ရှေ့အလယ်တည့်တည့်မှာ မီးမရှိတဲ့အဝိုင်းကြီး စောင့်ကြိုနေပါတယ်။
•အချက်ပြမီး ရှေ့မီးကြီး ဖွင့်ထားပါ။
•ကီလိုမီတာ ( ၆၀) ထက် ပိုမောင်းလို့ မကောင်းပါ။
ကားကြံခိုင်ရေး စစ်ဆေးချိန် မရရင် ညပိုင်းသွားခြင်း ရှောင်ကြည်ပါ။
အမြန်လမ်း အသုံးပြုတဲ့ မိတ်ဆွေတွေ ဘေးကင်းနိုင်ကြပါစေ…။
နောက်ထပ် သတိမှုစရာလေးများကျန်ခဲ့လျှင် ဖြည့်စွက် ရေးသားကြပါ။ ဒီစာကိုရေးသားနိုင်တာဟာ ကျနော်တစ်ဦးထဲအတွေ့အကြုံမဟုတ်ပါ။
ယာဉ်မောင်းသက် ၁၅နှစ်ကျော် ရှိတဲ့ ယာဉ်မောင်း မိတ်ဆွေကြီး တွေ ရဲ့ အတွေ့အကြုံတွေကြောင့်ပါ။
လိုအပ်တဲ့ နေရာ နဲ့ သတိပြုရန် အချက်များလည်း ထပ်ပြီးဖော်ပြရေးသားပေးခြင်းဖြင့် ခရီးသွား နှင့် ခရီးဖော် ဘဝတူယာဉ်မောင်းများအား ကူညီ ပေး ကြပါခင်ဗျ…… !!!!!!!
သှားကွဦးမလား.. ရိုးရိုးခနျး 1500 ရှယျခနျး 3000
October 23, 2021 by Zaw Hein
သှားကွဦးမလား.. ရိုးရိုးခနျး 1500 ရှယျခနျး 3000 နဲ့ နာမညျကွီးနတေဲ့ရနျကုနျက ခြှေးထုတျခနျး…
တနသေ့ောအခါ လူငယျ တဈယောကျ မွို့ပျေါသို့ရောကျကာ လြှောကျ လညျပတျနသေညျ။
ထိုစဉျ “ခြှေးထုတျခနျး” ဟုရေးသားထားသော ဆိုငျးဘုတျကွီး ကိုတှမေိ့၍ မော့ကွညျ့လိုကျသညျ။
စပျစုလိုသောကွောငျ့ ထိုခြှေးထုတျခနျးထဲဝငျရနျ အရှတှေ့ငျထိုငျနသေော လူကွီးကို မေးလိုကျသညျ။
“ဘယျလောကျလဲဗြ။ ခြှေးတခါ ထုတျ” ” ရိုးရိုးခြှေးထုတျခနျးက 1500။ ရှယျ ခနျးက 3000 ပါ ညီလေး”
“ဒါဆို ရိုးရိုးခနျးဝငျကွညျ့မယျဗြာ။ အခြိနျက ဘယျလောကျရမလဲ ”
“ရိုးရိုးခနျးက 15 မိနဈ။ ရှယျခနျးဆိုရငျ မိနဈ 30”
“ဟုတျကဲ့ဗြ။ ရော့ 1500” လူကွီးက အခနျးတဈခနျးကို ဖှငျ့ပေးပွီး ပွနျပိတျသှားသညျ။
အခနျးသညျ 12ပေ ခနျ့ကယျြဝနျးပွီး ကုတငျတဈလုံးက ကနျ့လနျ့ဖွတျခထြားသညျ။
အခနျးထဲတှငျ အဝတျအစား မလုံ့တလုံနှငျ့ကောငျမလေး တဈယောကျက သူ့ကို ပွုံးပွပွီး… “လာ မိအောငျလိုကျဖမျး။
မိရငျ ကွိုကျတာလုပျ။ ကုတငျပျေါ ဖွတျမပွေးရဘူး နျော။ ကဲ..စပွီ လိုကျတော့”
စကားဆုံးသညျနှငျ့ ကောငျမလေး ရှကေ့ပွေး သူကနောကျကလိုကျနှငျ့ ခကျြခွငျး ဖမျးမမိနိုငျဘဲ ခြှေးတှေ ထှကျလာသညျ။
ထိုစဉျဖွုနျးခနဲ တံခါးပှငျ့သှားပွီး လူကွီး အခနျးထဲ ဝငျလာသညျ။
“အခြိနျစသှေ့ားပွီ ညီလေး” သူနာရီကွညျ့လိုကျတော့ ဟုတျနသေညျ။
အခြိနျက..ဘာမြှမရှိလိုကျသလို။ မိလုမိခငျအနအေထားမှာ အခြိနျပွညျ့ သှားသညျကိုး ။
နောကျထပျသုံး လေး မိနဈလောကျဆိုရငျ မိပွီ။ စိတျတိုငျးကြ ဖွဈပွီလေ။ သူမကနြေပျဘူး။ ဒါနဲ့..နောကျ
တဈခါဆို အဆငျသငျ့ဖွဈအောငျ အကြီ င်ျကိုပါ ခြှတျခလြိုကျပွီး …
“ရော့…ဦးလေး။ ဒီတခါ ရှယျခနျးဝငျမယျ။ ငှေ 3000”
“လာ…ညီလေး လာ” ပွောပွောဆိုဆို အခနျးတခုကို ဖှငျ့ပေးလိုကျသညျ။
အခနျးထဲရောကျတော့ မီးမှိနျမှိနျလေး ထှနျးထားသညျ။
မကျြစိကငျြ့သားရသှားတဲ့အခြိနျ ရောကျတော့ နှုတျခမျးမှေးစစနဲ့ ဗလတောငျ့တောငျ့ လူကွီးတဈယောကျ။
ခါးတောငျးကို မွောငျနအေောငျ ကြိုကျထားသညျ။ သူ့ကိုပွုံးပွလိုကျပွီး…
“ကဲ …ညီလေးရေ။ လှတျအောငျပွေး မိရငျတော့ နာပွီသာမှတျ စပွီဟေ့။ မိနဈ ၃၀”
သွားကြဦးမလား.. ရိုးရိုးခန်း 1500 ရှယ်ခန်း 3000
သွားကြဦးမလား.. ရိုးရိုးခန်း 1500 ရှယ်ခန်း 3000 နဲ့ နာမည်ကြီးနေတဲ့ရန်ကုန်က ချွေးထုတ်ခန်း…
တနေ့သောအခါ လူငယ် တစ်ယောက် မြို့ပေါ်သို့ရောက်ကာ လျှောက် လည်ပတ်နေသည်။
ထိုစဉ် “ချွေးထုတ်ခန်း” ဟုရေးသားထားသော ဆိုင်းဘုတ်ကြီး ကိုတွေ့မိ၍ မော့ကြည့်လိုက်သည်။
စပ်စုလိုသောကြောင့် ထိုချွေးထုတ်ခန်းထဲဝင်ရန် အရှေ့တွင်ထိုင်နေသော လူကြီးကို မေးလိုက်သည်။
“ဘယ်လောက်လဲဗျ။ ချွေးတခါ ထုတ်” ” ရိုးရိုးချွေးထုတ်ခန်းက 1500။ ရှယ် ခန်းက 3000 ပါ ညီလေး”
“ဒါဆို ရိုးရိုးခန်းဝင်ကြည့်မယ်ဗျာ။ အချိန်က ဘယ်လောက်ရမလဲ ”
“ရိုးရိုးခန်းက 15 မိနစ်။ ရှယ်ခန်းဆိုရင် မိနစ် 30”
“ဟုတ်ကဲ့ဗျ။ ရော့ 1500” လူကြီးက အခန်းတစ်ခန်းကို ဖွင့်ပေးပြီး ပြန်ပိတ်သွားသည်။
အခန်းသည် 12ပေ ခန့်ကျယ်ဝန်းပြီး ကုတင်တစ်လုံးက ကန့်လန့်ဖြတ်ချထားသည်။
အခန်းထဲတွင် အဝတ်အစား မလုံ့တလုံနှင့်ကောင်မလေး တစ်ယောက်က သူ့ကို ပြုံးပြပြီး… “လာ မိအောင်လိုက်ဖမ်း။
မိရင် ကြိုက်တာလုပ်။ ကုတင်ပေါ် ဖြတ်မပြေးရဘူး နော်။ ကဲ..စပြီ လိုက်တော့”
စကားဆုံးသည်နှင့် ကောင်မလေး ရှေ့ကပြေး သူကနောက်ကလိုက်နှင့် ချက်ခြင်း ဖမ်းမမိနိုင်ဘဲ ချွေးတွေ ထွက်လာသည်။
ထိုစဉ်ဖြုန်းခနဲ တံခါးပွင့်သွားပြီး လူကြီး အခန်းထဲ ဝင်လာသည်။
“အချိန်စေ့သွားပြီ ညီလေး” သူနာရီကြည့်လိုက်တော့ ဟုတ်နေသည်။
အချိန်က..ဘာမျှမရှိလိုက်သလို။ မိလုမိခင်အနေအထားမှာ အချိန်ပြည့် သွားသည်ကိုး ။
နောက်ထပ်သုံး လေး မိနစ်လောက်ဆိုရင် မိပြီ။ စိတ်တိုင်းကျ ဖြစ်ပြီလေ။ သူမကျေနပ်ဘူး။ ဒါနဲ့..နောက်
တစ်ခါဆို အဆင်သင့်ဖြစ်အောင် အကျီ င်္ကိုပါ ချွတ်ချလိုက်ပြီး …
“ရော့…ဦးလေး။ ဒီတခါ ရှယ်ခန်းဝင်မယ်။ ငွေ 3000”
“လာ…ညီလေး လာ” ပြောပြောဆိုဆို အခန်းတခုကို ဖွင့်ပေးလိုက်သည်။
အခန်းထဲရောက်တော့ မီးမှိန်မှိန်လေး ထွန်းထားသည်။
မျက်စိကျင့်သားရသွားတဲ့အချိန် ရောက်တော့ နှုတ်ခမ်းမွေးစစနဲ့ ဗလတောင့်တောင့် လူကြီးတစ်ယောက်။
ခါးတောင်းကို မြောင်နေအောင် ကျိုက်ထားသည်။ သူ့ကိုပြုံးပြလိုက်ပြီး…
“ကဲ …ညီလေးရေ။ လွတ်အောင်ပြေး မိရင်တော့ နာပြီသာမှတ် စပြီဟေ့။ မိနစ် ၃၀”
အောကျဆီဂငျြအိုး ဝယျဆောငျထားသူမြားအတှကျ အထူးသတိပွုရနျ အရေးကွီးအခကျြမြား
July 5, 2021 by Zaw Hein
အောကျဆီဂငျြ အိုး​တှကေိုဝယျယူ အိမျမှာ​ဆောငျထားကွပွီဆို​တော့ ​ဆောငျရနျ ​ရှောငျရနျ​လေး​တှေ ​ပွော​ပေးပါ့မယျ​
၁။​အောကျဆီဂငျြဟာ radiation မဖွဈပါဘူး။ ဒါ​ကွောငျ့ သူ့နားမှာ ဖုနျး​ပွောနိုငျပါတယျ။
၂။​အောကျဆီဂငျြဟာ ကိုယျတိုငျမီးမ​လောငျနိုငျပါဘူး၊ ဒါ​ပမေယျ့ မီးလောငျခွငျးကို အား​ပေးပါတယျ။ ဒါ​ကွောငျ့ မီးဖို​ဘေး၊ မီးနဲ့ပတျသကျတဲ့ ​နရော​တှနေဲ့ ​ဝေး​ဝေးထား​ပေးရပါမယျ။ ဒီအိုးနားမှာ ​ဆေးလိပျမ​သောကျရပါဘူး။မီးပကျြလို့ သူ့​ပျေါမှာ ဖ​ယောငျးတိုငျ​လေးထှနျးတာမြိုး လုံးဝလုံးဝမလုပျရပါဘူး​။
၃။​လဖွေညျ့ထားတဲ့ ​အောကျဆီဂငျြအိုးဟာ အတှငျးထဲမှာ ​လေ​ပေါငျ pressure 1800psi ရှိတာမို့ ​လရှေိ​နတေဲ့အိုး​တှကေို ထုရိုကျခွငျး၊ကွမျးကွမျးတမျးတမျးပဈခခြွငျးမြိုးကို ​ရှောငျကွဉျရပါမယျ။
၄။အ​ရေးအကွီးဆုံးက​တော့ ​အောကျဆီဂငျြ​အိုး​တှဟော ဆီမှနျသမြှ​ကွောကျပါတယျ။ ဓါတျဆီ၊ ဒီဇယျ၊ စားဆီ၊ ​ခေါငျးလိမျးဆီ စသညျမြားနှငျ့ လုံးဝမထိမိ​အောငျထား​စခေငျြပါတယျ။လှညျ့တဲ့ ဝှီးဘား​လေးကွပျ​နလေို့ ဆီ​လေးထညျ့လိုကျမယျဆိုတာမြိုးတှေ လုံးဝလုံးဝ မလုပျမိပါ​စနေဲ့။​ filling လုပျတဲ့အခြိနျပေါကျကှဲ​စတေတျပါတယျ။
၅။​အောကျဆီဂငျြအိုးကို လဲကခြွငျးမဖွဈ​အောငျ ခိုငျမာတဲ့ တဈခုခုမှာ ခညျြ​နှောငျထားရပါမယျ။သတိရှိနိုငျကွပါ​စေ။
အောက်ဆီဂျင်အိုး ဝယ်ဆောင်ထားသူများအတွက် အထူးသတိပြုရန် အရေးကြီးအချက်များ
အောက်ဆီဂျင် အိုး​တွေကိုဝယ်ယူ အိမ်မှာ​ဆောင်ထားကြပြီဆို​တော့ ​ဆောင်ရန် ​ရှောင်ရန်​လေး​တွေ ​ပြော​ပေးပါ့မယ်​
၁။​အောက်ဆီဂျင်ဟာ radiation မဖြစ်ပါဘူး။ ဒါ​ကြောင့် သူ့နားမှာ ဖုန်း​ပြောနိုင်ပါတယ်။
၂။​အောက်ဆီဂျင်ဟာ ကိုယ်တိုင်မီးမ​လောင်နိုင်ပါဘူး၊ ဒါ​ပေမယ့် မီးလောင်ခြင်းကို အား​ပေးပါတယ်။ ဒါ​ကြောင့် မီးဖို​ဘေး၊ မီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ​နေရာ​တွေနဲ့ ​ဝေး​ဝေးထား​ပေးရပါမယ်။ ဒီအိုးနားမှာ ​ဆေးလိပ်မ​သောက်ရပါဘူး။မီးပျက်လို့ သူ့​ပေါ်မှာ ဖ​ယောင်းတိုင်​လေးထွန်းတာမျိုး လုံးဝလုံးဝမလုပ်ရပါဘူး​။
၃။​လေဖြည့်ထားတဲ့ ​အောက်ဆီဂျင်အိုးဟာ အတွင်းထဲမှာ ​လေ​ပေါင် pressure 1800psi ရှိတာမို့ ​လေရှိ​နေတဲ့အိုး​တွေကို ထုရိုက်ခြင်း၊ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းပစ်ချခြင်းမျိုးကို ​ရှောင်ကြဉ်ရပါမယ်။
၄။အ​ရေးအကြီးဆုံးက​တော့ ​အောက်ဆီဂျင်​အိုး​တွေဟာ ဆီမှန်သမျှ​ကြောက်ပါတယ်။ ဓါတ်ဆီ၊ ဒီဇယ်၊ စားဆီ၊ ​ခေါင်းလိမ်းဆီ စသည်များနှင့် လုံးဝမထိမိ​အောင်ထား​စေချင်ပါတယ်။လှည့်တဲ့ ဝှီးဘား​လေးကြပ်​နေလို့ ဆီ​လေးထည့်လိုက်မယ်ဆိုတာမျိုးတွေ လုံးဝလုံးဝ မလုပ်မိပါ​စေနဲ့။​ filling လုပ်တဲ့အချိန်ပေါက်ကွဲ​စေတတ်ပါတယ်။
၅။​အောက်ဆီဂျင်အိုးကို လဲကျခြင်းမဖြစ်​အောင် ခိုင်မာတဲ့ တစ်ခုခုမှာ ချည်​နှောင်ထားရပါမယ်။သတိရှိနိုင်ကြပါ​စေ။
မိမိအားမုနျးနသေူ ကို ခဈြစလေိုလြှငျ ဒါလေးတှလေုပျလိုကျပါ ပွနျခဈြလာပါလိမျ့မယျ
June 3, 2021 by Zaw Hein
မိမိအားမုနျးနသေူ ကို ခဈြစလေိုလွှငျ ဒါလေးတှလေုပျလိုကျပါ ပွနျခဈြလာပါလိမျ့မယျ
အရှငျဘုရား တပညျ့တျော ကို လူတဈယောကျက မုနျးနပေါတယျ၊ အဲဒါ ပွနျခဈြလာအောငျ ဘယျလိုလုပျရမလဲ နညျးလမျးရှိပါသလားဘုရား၊
အဲဒီလူက အရငျကတော့ တပညျ့တျောကို ခဈြနှဈသကျပါတယျ။ အခုမှ မုနျးသှားတယျ ထငျတယျ၊နညျးလမျး ရှိတယျ ဆိုရငျကူညီပါအုံးဘုရ့ား၊
ဒါက ရနျကုနျက ဒါယကာမ တဈယောကျကပွောပွအကူအညီ တောငျးတဲ့ စကားလေးပါ၊
လောကမှာ လူတိုငျးလူတိုငျးအတှကျကိုယျ့ကို မုနျးတဲ့ရနျသူတှေ၊ ခဈြခငျပွီးမှ စိမျးကားရကျစကျသှားသူတှေ၊ ကိုယျကွီးပှားအောငျမွငျကွျောကွားနတောကို မနာလိုသူတှေ နဲ့
စီးပှားပွိုငျဘကျအခငျြးခငျြး ပွိုငျဘကျကို မကောငျးကွံပွီး အနိုငျယူတာတှေ အားလုံးဟာမကွုံခငျြလညျး ကွုံရ၊ မဆုံခငျြလညျး ဆုံရတဲ့ လူ့ဘဝထဲက အဖွဈအပွကျတှပေဲ မဟုတျလား၊
ဒါကွောငျ့လဲ လူ့ဘဝက တိုတောငျးပမေယျ့ စိတျကွညျနူးစရာက နညျးနညျး-စိတျဆငျးရဲစရာတှကေ တနေ့တနေ့မှာ ကွုံရတာ မြားလှနျးလို့ လူတခု ပူမှု့ရယျကဆယျကုဋေ လို့တောငျ ရှေးလူကွီးတှကေငွီးတှားခဲ့ကွတယျ။
စာရေးသူက ဖွလေိုကျတယျ အျော ရှိပါတယျ၊ ဗဒေငျ ယတွာတှေ အငျးအိုငျ ခလှဲ့တှတေော့ မတတျပါဘူး၊ ဒါပမေယျ့ ဘုရားဟောထားတဲ့ နညျးလမျး ကို ပွောပွပါ့မယျ၊
လူတျောတျောမြားမြား အဆငျပွသှေားကွတာ ဆိုတော့ ဒကာမလေးလဲပွလေညျနိုငျမယျ လို့ ထငျတယျ၊
ယုံယုံကွညျကွညျနဲ့ ပွောပွထားတဲ့ အစီအစဉျအတိုငျး လုပျရငျ တကယျပဲအဆငျပွလေိမျ့မယျလို့ မြှျောလငျ့ပါတယျ၊ ဒကာမလေး ကို အကွောငျးပွုပွီးအားလုံးကို သိစခေငျြလို့ ဒီကနပေဲ ဖွပေေးလိုကျပါမယျ၊
ဘာဖွဈလို့လဲ ဆိုတော့ ဒီနညျးလမျးကို နှလုံးသားအတှကျ သကျသကျသာ မဟုတျပဲ
ကနျြတဲ့ စီးပှားရေး လူမှု့ရေး ဘာသာရေး စတာတှမှော နားလညျမှု့လှဲပွီး စိတျဝမျးကှဲနရေငျဖွဈစေ ရနျသူတှလေို ဆကျဆံနရေရငျ ဖွဈစေ မိတျဆှေ သူငယျခငျြးအပေါငျးအသငျးအခငျြးခငျြး မညီညှတျပဲ စိတျညဈ သောက ရောကျနရေငျ ဖွဈစအေသုံးပွုနိုငျပါတယျ။
ကဲ ကောငျးပါပွီ၊ အောကျမှာ ဖျောပွမယျ့ နညျးလမျးလေးကို ပေးလိုကျတာ ၁၅ ရကျတောငျ မကွာလိုကျဘူး၊ အဲဒီ ဒကာမလေးဆီက ဖုနျးဆကျပွောပွပါတယျ၊
အရှငျဘုရား အဆငျပွသှေားပါပွီ၊ ကွေးဇူး အမြားကွီး တငျပါတယျ၊ တပညျ့တျော ပွောတဲ့လူတယောကျဆိုတာ အရှငျဘုရား ဒကာကွီးပါ။သူက အိမျကို ပွနျမလာတော့လို့ အကူအညီတောငျးရတာပါတဲ့၊
တကယျတော့ ဒီနညျးလမျးကို အသုံ့းပွုရငျ ကိုယျ့အပျေါ မကောငျးကွံထားသူတှတေောငျ လာပွီး ဒူးထောကျတောငျးပနျတာမွိုးတှေ ရှိခဲ့ဖူးတယျ လို့ ဆိုပါတယျ၊ဒါကွောငျ့ စာဖတျ ပရိသတျမြား သသေခြောခြာမှတျသားပွီး အကွိုးရှိရှိအသုံးပွုစခေငျြပါတယျ၊
၁၊ ဘုရားစငျရှမှေ့ာ သနျ့စငျတဲ့ ဖနျခှကျတဈခှကျထဲကို သောကျရသေနျ့သနျ့အပွညျ့နီးပါး ထညျ့ပါ၊
၂ ။ ပွီးတာနဲ့ ကွောကျခဲသေးသေးတလုံးကို ဆေးကွောပွီး ဖနျခှကျထဲ ထညျ့ရပါမညျ၊
၃ ။ ကိုယျ့ကို မုနျးနသေူ မခဈြမနှဈသကျသူ ကို ဓာတျပုံရှိက ဓာတျပုံကိုဖနျခှကျဘေးမှာ ထောငျထားရပါမယျ၊
ဓာတျပုံမရှိလဲ သူ့ပုံရိပျကို အာရုံပွုပွီး ပှားမြားနိုငျပါတယျ၊ တခါမှ မမွငျဘူးသူ တဈယောကျကို ပို့လိုရငျတော့ သူ့ နာမညျကို ပါးစပျက ရှတျဆိုပွီး ပို့နိုငျပါတယျ။
ဆိုကွပါစို့ မောငျကွျောကို ဥပမာ အနနေဲ့ ပို့ကွညျ့ရအောငျ – –
ကဲ မောငျကွျော၊ မငျးက ငါ့အပျေါ မုနျးတီးနပေမေယျ့ ငါကတော့ မတ်ေတာမပွကျခဈြခငျနလွေကျပါ၊
ဒါကွောငျ့ မငျး အမုနျးတှပွေပြေောကျပွီး ငါ့အပျေါ ခဈြခငျစခေငျြပါတယျ၊
ရထေဲမှာ ရှိတဲ့ ကွောကျခဲလေးဟာ အေးမွနသေလို အခု မငျးကို အေးမွတဲ့ရထေဲမှာ စိမျထားလိုကျပွီ၊
မငျးရဲ့ ဒေါသတှေ ပွပြေောကျပွီး စိတျရော လူရော အေးခမျြးလာပွီး ငါ့အပျေါမတ်ေတာသကျဝငျလာပါစေ၊
ငါကတော့ မငျးကို အပွဈမမွငျပါဘူး၊ ဆကျလကျ ခဈြခငျနမှောပါ၊
လကျထပျထားသူ ဖွဈက အရငျလို ခဈြခငျပါစေ – စသညျဖွငျ့ ပါးစပျက ရှတျဆိုရပါမယျ၊
ကွောကျခဲလေးကို လူအမှတျနဲ့ အာရုံပွုနိုငျအောငျ ကွိုးစားပွီးတဈနေ့ ၂ ကွိမျ ၃ ကွိမျလောကျ ပို့ရပါမယျ၊အကွိမျမြားစှာ ဆိုရငျတော့ အကောငျးဆုံးပေါ့၊
၄ ။ တဈဦးတယောကျအပျေါ ရညျစူးမတ်ေတာပို့ပွီးရငျတော့ သတ်တဝါအားလုံးနဲ့နတျဗွဟ်မာတှကေို တိုငျတညျပွီးမတ်ေတာပို့ အမြှဝေ ရပါမယျ၊
မွနျမာနိုငျငံ သာသနာ့ သမိုငျးမှာ မတ်ေတာအရာမှာ ထငျရှားကွျောကွားတဲ့ တောငျတနျးသာသနာပွု ဆရာတျောကွီး ဦးဥတ်တမ သာရကိုယျတျောတိုငျ ပေးသနားထားခဲ့တဲ့အတှကျယုံယုံကွညျကွညျ အသုံးပွုပွီး မုနျးသူ မနာလိုသူ ရနျသူအားလုံးကို ခဈြခငျကွငျနာနိုငျပါစေ၊
မှတျခွကျ၊ကိုယျက အမုနျးခံနရေမှ အသုံးပွုသငျ့ပါတယျ၊ကိုယျက မုနျးနသေူဆိုရငျတော့ အခွိနျယူပွီး ပှားမြားမှ သကျရောကျပါလိမျ့မယျ၊
အရှငျသုနန်ဒာလင်ျကာရ – M A ( ပနျးကမ်ဘာ )
မိမိအားမုန်းနေသူ ကို ချစ်စေလိုလြှင် ဒါလေးတွေလုပ်လိုက်ပါ ပြန်ချစ်လာပါလိမ့်မယ်
အရွင်ဘုရား တပည့်တော် ကို လူတစ်ယောက်က မုန်းနေပါတယ်၊ အဲဒါ ပြန်ချစ်လာအောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ နည်းလမ်းရွိပါသလားဘုရား၊
အဲဒီလူက အရင်ကေတာ့ တပည့်တော်ကို ချစ်နွစ်သက်ပါတယ်။ အခုမွ မုန်းသွားတယ် ထင်တယ်၊နည်းလမ်း ရွိတယ် ဆိုရင်ကူညီပါအုံးဘုရ့ား၊
ဒါက ရန်ကုန်က ဒါယကာမ တစ်ယောက်ကေပြာပြအကူအညီ တောင်းတဲ့ စကားလေးပါ၊
လောကမွာ လူတိုင်းလူတိုင်းအတွက်ကိုယ့်ကို မုန်းတဲ့ရန်သူတွေ၊ ချစ်ခင်ပြီးမွ စိမ်းကားရက်စက်သွားသူတွေ၊ ကိုယ်ကြီးပွားအောင်မြင်ကြော်ကြားနေတာကို မနာလိုသူတွေ နဲ့
စီးပွားပြိုင်ဘက်အချင်းချင်း ပြိုင်ဘက်ကို မေကာင်းကြံပြီး အနိုင်ယူတာတွေ အားလုံးဟာမကြုံချင်လည်း ကြုံရ၊ မဆုံချင်လည်း ဆုံရတဲ့ လူ့ဘဝထဲက အဖြစ်အပက်ြတွေပဲ မဟုတ်လား၊
ဒါကြောင့်လဲ လူ့ဘဝက တိုတောင်းပေမယ့် စိတ်ကြည်နူးစရာက နည်းနည်း-စိတ်ဆင်းရဲစရာတွေက တေန့တေန့မွာ ကြုံရတျာမားလွန်းလို့ လူတခု ပူမှု့ရယ်ကဆယ်ကုဋေ လို့တောင် ရွေးလူကြီးတွေကငြီးတွားခဲ့ကြတယ်။
စာရေးသူက ဖြေလိုက်တယ် အော် ရွိပါတယ်၊ ဗေဒင် ယတြာတွေ အင်းအိုင် ခလွဲ့တွေတော့ မတတ်ပါဘူး၊ ဒါပေမယ့် ဘုရားဟောထားတဲ့ နည်းလမ်း ကို ပြောပြပါ့မယ်၊
လူတော်တော်ျမာျးမား အဆင်ပြေသွားကြတာ ဆိုတော့ ဒကာမေလးလဲပြေလည်နိုင်မယ် လို့ ထင်တယ်၊
ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ ပြောပြထားတဲ့ အစီအစဉ်အတိုင်း လုပ်ရင် တကယ်ပဲအဆင်ပြေလိမ့်မယ်လို့ျေမှာ်လင့်ပါတယ်၊ ဒကာမေလး ကို အေကြာင်းပြုပြီးအားလုံးကို သိစေချင်လို့ ဒီကနေပဲ ဖြေပေးလိုက်ပါမယ်၊
ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ ဒီနည်းလမ်းကို နွလုံးသားအတွက် သက်သက်သာ မဟုတ်ပဲ
ကျန်တဲ့ စီးပွားရေး လူမှု့ရေး ဘာသာရေး စတာတွေမွာ နားလည်မှု့လွဲပြီး စိတ်ဝမ်းကွဲနေရင်ဖြစ်စေ ရန်သူတွေလို ဆက်ဆံနေရရင် ဖြစ်စေ မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းအေပါင်းအသင်းအချင်းချင်း မညီညှတ်ပဲ စိတ်ညစ် သောက ရောက်နေရင် ဖြစ်စေအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
ကဲ ကောင်းပါပြီ၊ အောက်မွာ ဖော်ပြမယ့် နည်းလမ်းလေးကို ပေးလိုက်တာ ၁၅ ရက်တောင် မကြာလိုက်ဘူး၊ အဲဒီ ဒကာမေလးဆီက ဖုန်းဆက်ပြောပြပါတယ်၊
အရွင်ဘုရား အဆင်ပြေသွားပါပြီ၊ ကြေးဇူး အျမားကြီး တင်ပါတယ်၊ တပည့်တော် ပြောတဲ့လူတေယာက်ဆိုတာ အရွင်ဘုရား ဒကာကြီးပါ။သူက အိမ်ကို ပြန်မလာတော့လို့ အကူအညီတောင်းရတာပါတဲ့၊
တကယ်တော့ ဒီနည်းလမ်းကို အသုံ့းပြုရင် ကိုယ့်အေပါ် မေကာင်းကြံထားသူတွေတောင် လာပြီး ဒူးထောက်တောင်းပန်တာမြိုးတွေ ရွိခဲ့ဖူးတယ် လို့ ဆိုပါတယ်၊ဒါကြောင့် စာဖတ် ပရိသတ်ျမား သေသျေချာခာမွတ်သားပြီး အကြိုးရွိရွိအသုံးပြုစေချင်ပါတယ်၊
၁၊ ဘုရားစင်ရွေ့မွာ သန့်စင်တဲ့ ဖန်ခွက်တစ်ခွက်ထဲကို သောက်ရေသန့်သန့်အပြည့်နီးပါး ထည့်ပါ၊
၂ ။ ပြီးတာနဲ့ ကြောက်ခဲသေးသေးတလုံးကို ဆေးကြောပြီး ဖန်ခွက်ထဲ ထည့်ရပါမည်၊
၃ ။ ကိုယ့်ကို မုန်းနေသူ မချစ်မနွစ်သက်သူ ကို ဓာတ်ပုံရွိက ဓာတ်ပုံကိုဖန်ခွက်ဘေးမွာ ထောင်ထားရပါမယ်၊
ဓာတ်ပုံမရွိလဲ သူ့ပုံရိပ်ကို အာရုံပြုပြီး ပွာျးမားနိုင်ပါတယ်၊ တခါမွ မမြင်ဘူးသူ တစ်ယောက်ကို ပို့လိုရင်တော့ သူ့ နာမည်ကို ပါးစပ်က ရွတ်ဆိုပြီး ပို့နိုင်ပါတယ်။
ဆိုကြပါစို့ မောင်ကြော်ကို ဥပမာ အနေနဲ့ ပို့ကြည့်ရေအာင် – –
ကဲ မောင်ကြော်၊ မင်းက ငါ့အေပါ် မုန်းတီးနေပေမယ့် ငါကေတာ့ မေတ္တာမပက်ြချစ်ခင်နေလက်ြပါ၊
ဒါကြောင့် မင်း အမုန်းတွေပျြေပောက်ပြီး ငါ့အေပါ် ချစ်ခင်စေချင်ပါတယ်၊
ရေထဲမွာ ရွိတဲ့ ကြောက်ခဲလေးဟာ အေးမြနေသလို အခု မင်းကို အေးမြတဲ့ရေထဲမွာ စိမ်ထားလိုက်ပြီ၊
မင်းရဲ့ ဒေါသေတွ ပျြေပောက်ပြီး စိတ်ရော လူရော အေးချမ်းလာပြီး ငါ့အေပ်ါမေတ္တာသက်ဝင်လာပါစေ၊
ငါကေတာ့ မင်းကို အပြစ်မမြင်ပါဘူး၊ ဆက်လက် ချစ်ခင်နေမွာပါ၊
လက်ထပ်ထားသူ ဖြစ်က အရင်လို ချစ်ခင်ပါစေ – စသည်ဖြင့် ပါးစပ်က ရွတ်ဆိုရပါမယ်၊
ကြောက်ခဲလေးကို လူအမွတ်နဲ့ အာရုံပြုနိုင်အောင် ကြိုးစားပြီးတစ်နေ့ ၂ ကြိမ် ၃ ကြိမ်လောက် ပို့ရပါမယ်၊အကြိမ်ျမားစွာ ဆိုရင်တော့ အေကာင်းဆုံးပေါ့၊
၄ ။ တစ်ဦးတေယာက်အေပါ် ရည်စူးမေတ္တာပို့ပြီးရင်တော့ သတ္တဝါအားလုံးနဲ့နတ်ဗြဟ္မာတွေကို တိုင်တည်ပြီးမေတ္တာပို့ အျမှေဝ ရပါမယ်၊
မြန်မာနိုင်ငံ သာသနာ့ သမိုင်းမွာ မေတ္တာအရာမွာ ထင်ရွားကြော်ကြားတဲ့ တောင်တန်းသာသနာပြု ဆရာတော်ကြီး ဦးဥတ္တမ သာရကိုယ်တော်တိုင် ပေးသနားထားခဲ့တဲ့အတွက်ယုံယုံကြည်ကြည် အသုံးပြုပြီး မုန်းသူ မနာလိုသူ ရန်သူအားလုံးကို ချစ်ခင်ကြင်နာနိုင်ပါစေ၊
မွတ်ခကြ်၊ကိုယ်က အမုန်းခံနေရမွ အသုံးပြုသင့်ပါတယ်၊ကိုယ်က မုန်းနေသူဆိုရင်တော့ အခြိန်ယူပြီး ပွာျးမားမွ သက်ရောက်ပါလိမ့်မယ်၊
မေတ္တာဖြင့် လူအားလုံး ငြိမ်းအေးနိုင်ကြပါစေ။
အရွင်သုနန္ဒာလင်္ကာရ – M A ( ပန်းကမ္ဘာ )
FB သုံးတာ ဒီလိုပို့ဈမြိုးတှကွေောငျ့ ဘလျေ ကုနျရကြိုး နပျနတောပါ…မကျြရညျခိုငျရငျတော့ ဖတျကွညျ့စခေငျြတယျ
September 6, 2020 by Zaw Hein
လငျမယား စုံတှဲတဈတှဲပါလာတဲ့သင်ျဘောတဈစငျး နဈမွှုပျသှားတယျ…
အသကျကယျလှပေျေါမှာ နရောဆိုလို့တဈနရောဘဲ ကနျြတော့တယျ…
အဲဒီအခြိနျမှာ ယောကျြားဖွဈသူက သူ့မိနျးမကိုသူ့အနောကျဆှဲခလြိုကျပွီး သူကိုယျတိုငျအသကျကယျလှပေျေါခုံတကျလိုကျတယျ…
အဲဒီ အမြိုးသမီး ကတော့တဖွညျးဖွညျးခငျြးနဈမွှုပျနတေဲ့သင်ျဘောပျေါမှာရပျပွီးသူ့ယောကျြားကို စကားတဈခှနျးအျောပွောလိုကျတယျ…
ဒီနရောအထိပွောပွီးတော့ ဆရာမကကြောငျးသားတှကေို မေးလိုကျတယျ…
“မငျးတို့ ခနျ့မှနျးကွညျ့…အမြိုးသမီးက ဘာအျောပွောလိုကျသလဲ?”
ကြောငျးသားတှကေတော့ အလုအယကျဒေါနဲ့မောနဲ့ အျောပွောကွတယျ…“ငါနငျ့ကိုမုနျးတယျ… ငါကို ထားပဈရဈခဲ့တယျ… ”
အဲဒီအခြိနျမှာ ဆရာမကကြောငျးသူလေးတဈယောကျကိုဘာမှမပွောတာကို သတိထားမိတော့ဆရာမက သူ့ကိုမေးလိုကျတယျ…
အဲဒီကြောငျးသူလေးက ပွနျဖွလေိုကျတယျ…“ဆရာမ… သမီး ထငျတယျ…
အဲဒီ အမြိုးသမီးအျောပွောလိုကျမှာက …ငါတို့ကလေးကို ကောငျးကောငျးဂရုစိုကျပေးပါ လို့”…
ဆရာမက အံ့သွသှားတယျ…သူ့ကို ပွနျမေးလိုကျတယျ…“အဲဒီ ပုံပွငျကို နားထောငျဖူးလို့လာ?”
ကြောငျးသူလေးက ခေါငျးကို ခါပွီး ပွောလိုကျတယျ…
“ဟငျ့အငျး… သမီး မမေေ နမေကောငျးဖွဈပွီးဆုံးခါနီးမှာ ဒီစကားဟာ သူ ဖဖေကေို့ ပွောခဲ့တဲ့စကားပါ…”
ဆရာမက ပွနျပွောလိုကျတယျ ….“အဖွမှေနျပါတယျကှယျ…”သင်ျဘော နဈမွှုပျသှားပါတယျ…
ယောကျြားက သူ့မွို့ကို ပွနျရောကျပွီးသမီးလေးကို ကွီးပွငျးလာတဲ့အထိ ကိုယျတိုငျပွုစုစောငျ့ရှောကျပေးခဲ့တယျ…
နှဈပေါငျးမြားစှာကွာပွီးနောကျအဲဒီယောကျြားဟာလဲ ရောဂါနဲ့ ဆုံးပါးသှားတော့…
သမီးဖွဈသူက သူကနျြရဈခဲ့တဲ့ ပစ်စညျးတှကေို ရှငျးတော့မှသူ့ဖဖေရေဲ့ နစေ့ဉျမှတျတမျးစာအုပျကိုတှတေ့ယျ…
အဲဒီအခြိနျရောကျမှ သူသိလိုကျတယျ…ဖဖေနေဲ့ မမေေ သင်ျဘောအတူစီးတဲ့အခြိနျမှာ မမေရေ့ောဂါဟာ နောကျဆုံးအဆငျ့ကိုရောကျနပေါပွီ…
အရေးပျေါအခြိနျမှာဖဖေဟော အသကျရှငျဖို့တဈမြှငျတာရှိတဲ့နရောကို အရောကျပွေးခဲ့တယျ…
သူ့ရဲ့ မှတျတမျးစာအုပျမှာရေးထားတာက“ငါ မငျးနဲ့ ဒီပငျလယျအောကျကို အတူတူသာနဈမွှုပျသှားလိုကျခငျြပါတယျ…
ဒါပမေဲ့ ဒါဟာ မဖွဈနိုငျပါဘူး…သမီးလေးအတှကျကွောငျ့….
သူ့ကြောငျးသားတှေ ဒီပုံပွငျရဲ့ အနှဈသာရကိုနားလညျလိမျ့မယျလို့…
ဒီလောကမှာရှိတဲ့ ကောငျးခွငျးဆိုးခွငျး ဆိုတာတှေ…တခါတလမှော ပှလေီရှုပျထှေးလှပါတယျ…
ပိုငျးခွားရမှာ ခကျခဲလှပါတယျ…ဒါကွောငျ့ အရာရာတိုငျးကို အပျေါယံဘဲကွညျ့ပွီးအလှယျတကူ ဝဖေနျပိုငျးခွားလို့မရပါဘူး…
ပိုကျဆံရှငျးခြိနျမှာပိုကျဆံအရငျထုတျပွီးရှငျးတဲ့သူဟာ…သူ ပိုကျဆံ အရမျးခမျြးသာနလေို့မဟုတျဘူး…
သူက ဒီသူငယျခငျြး သံယောဇဉျကိုငှကွေေးထကျပိုပွီး အလေးထားလို့ပါ…
အလုပျလုပျခြိနျမှာ အသိစိတျနဲ့ပိုပွီးကွိုးစားလုပျတဲ့သူဟာသူ အ နလေို့မဟုတျဘူး…သူက တာဝနျသိတတျလို့ပါ…
ရနျဖွဈတဲ့အခြိနျမှာအရငျဆုံး တောငျးပနျတဲ့သူဟာသူမှားနလေို့မဟုတျဘူး…ကိုယျ့ဘေးက လူကိုသူ တနျဖိုးထားရမှနျးသိနလေို့ပါ…
မငျးကို အမွဲ မကျဆပေို့ ဆကျသှယျနတေဲ့သူဟာသူအားယားနလေို့မဟုတျပါဘူး…ဒါဟာ သူ့ စိတျထဲမှာ မငျး ရှိနလေို့ပါဘဲ…
Credit: ( Dr Shwe Tun )
လင်မယား စုံတွဲတစ်တွဲပါလာတဲ့သင်္ဘောတစ်စင်း နစ်မြှုပ်သွားတယ်…
အသက်ကယ်လှေပေါ်မှာ နေရာဆိုလို့တစ်နေရာဘဲ ကျန်တော့တယ်…
အဲဒီအချိန်မှာ ယောက်ျားဖြစ်သူက သူ့မိန်းမကိုသူ့အနောက်ဆွဲချလိုက်ပြီး သူကိုယ်တိုင်အသက်ကယ်လှေပေါ်ခုံတက်လိုက်တယ်…
အဲဒီ အမျိုးသမီး ကတော့တဖြည်းဖြည်းချင်းနစ်မြှုပ်နေတဲ့သင်္ဘောပေါ်မှာရပ်ပြီးသူ့ယောက်ျားကို စကားတစ်ခွန်းအော်ပြောလိုက်တယ်…
ဒီနေရာအထိပြောပြီးတော့ ဆရာမကကျောင်းသားတွေကို မေးလိုက်တယ်…
“မင်းတို့ ခန့်မှန်းကြည့်…အမျိုးသမီးက ဘာအော်ပြောလိုက်သလဲ?”
ကျောင်းသားတွေကတော့ အလုအယက်ဒေါနဲ့မောနဲ့ အော်ပြောကြတယ်…“ငါနင့်ကိုမုန်းတယ်… ငါကို ထားပစ်ရစ်ခဲ့တယ်… ”
အဲဒီအချိန်မှာ ဆရာမကကျောင်းသူလေးတစ်ယောက်ကိုဘာမှမပြောတာကို သတိထားမိတော့ဆရာမက သူ့ကိုမေးလိုက်တယ်…
အဲဒီကျောင်းသူလေးက ပြန်ဖြေလိုက်တယ်…“ဆရာမ… သမီး ထင်တယ်…
အဲဒီ အမျိုးသမီးအော်ပြောလိုက်မှာက …ငါတို့ကလေးကို ကောင်းကောင်းဂရုစိုက်ပေးပါ လို့”…
ဆရာမက အံ့သြသွားတယ်…သူ့ကို ပြန်မေးလိုက်တယ်…“အဲဒီ ပုံပြင်ကို နားထောင်ဖူးလို့လာ?”
ကျောင်းသူလေးက ခေါင်းကို ခါပြီး ပြောလိုက်တယ်…
“ဟင့်အင်း… သမီး မေမေ နေမကောင်းဖြစ်ပြီးဆုံးခါနီးမှာ ဒီစကားဟာ သူ ဖေဖေ့ကို ပြောခဲ့တဲ့စကားပါ…”
ဆရာမက ပြန်ပြောလိုက်တယ် ….“အဖြေမှန်ပါတယ်ကွယ်…”သင်္ဘော နစ်မြှုပ်သွားပါတယ်…
ယောက်ျားက သူ့မြို့ကို ပြန်ရောက်ပြီးသမီးလေးကို ကြီးပြင်းလာတဲ့အထိ ကိုယ်တိုင်ပြုစုစောင့်ရှောက်ပေးခဲ့တယ်…
နှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီးနောက်အဲဒီယောက်ျားဟာလဲ ရောဂါနဲ့ ဆုံးပါးသွားတော့…
သမီးဖြစ်သူက သူကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့ ပစ္စည်းတွေကို ရှင်းတော့မှသူ့ဖေဖေရဲ့ နေ့စဉ်မှတ်တမ်းစာအုပ်ကိုတွေ့တယ်…
အဲဒီအချိန်ရောက်မှ သူသိလိုက်တယ်…ဖေဖေနဲ့ မေမေ သင်္ဘောအတူစီးတဲ့အချိန်မှာ မေမေ့ရောဂါဟာ နောက်ဆုံးအဆင့်ကိုရောက်နေပါပြီ…
အရေးပေါ်အချိန်မှာဖေဖေဟာ အသက်ရှင်ဖို့တစ်မျှင်တာရှိတဲ့နေရာကို အရောက်ပြေးခဲ့တယ်…
သူ့ရဲ့ မှတ်တမ်းစာအုပ်မှာရေးထားတာက“ငါ မင်းနဲ့ ဒီပင်လယ်အောက်ကို အတူတူသာနစ်မြှုပ်သွားလိုက်ချင်ပါတယ်…
ဒါပေမဲ့ ဒါဟာ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး…သမီးလေးအတွက်ကြောင့်….
သူ့ကျောင်းသားတွေ ဒီပုံပြင်ရဲ့ အနှစ်သာရကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့…
ဒီလောကမှာရှိတဲ့ ကောင်းခြင်းဆိုးခြင်း ဆိုတာတွေ…တခါတလေမှာ ပွေလီရှုပ်ထွေးလှပါတယ်…
ပိုင်းခြားရမှာ ခက်ခဲလှပါတယ်…ဒါကြောင့် အရာရာတိုင်းကို အပေါ်ယံဘဲကြည့်ပြီးအလွယ်တကူ ဝေဖန်ပိုင်းခြားလို့မရပါဘူး…
ပိုက်ဆံရှင်းချိန်မှာပိုက်ဆံအရင်ထုတ်ပြီးရှင်းတဲ့သူဟာ…သူ ပိုက်ဆံ အရမ်းချမ်းသာနေလို့မဟုတ်ဘူး…
သူက ဒီသူငယ်ချင်း သံယောဇဉ်ကိုငွေကြေးထက်ပိုပြီး အလေးထားလို့ပါ…
အလုပ်လုပ်ချိန်မှာ အသိစိတ်နဲ့ပိုပြီးကြိုးစားလုပ်တဲ့သူဟာသူ အ နေလို့မဟုတ်ဘူး…သူက တာဝန်သိတတ်လို့ပါ…
ရန်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအရင်ဆုံး တောင်းပန်တဲ့သူဟာသူမှားနေလို့မဟုတ်ဘူး…ကိုယ့်ဘေးက လူကိုသူ တန်ဖိုးထားရမှန်းသိနေလို့ပါ…
မင်းကို အမြဲ မက်ဆေ့ပို့ ဆက်သွယ်နေတဲ့သူဟာသူအားယားနေလို့မဟုတ်ပါဘူး…ဒါဟာ သူ့ စိတ်ထဲမှာ မင်း ရှိနေလို့ပါဘဲ…
ဆိုငျကို တကူးတက သှားစရာမလိုပဲ ရှကေို အရောငျတငျနညျး
August 15, 2020 by Zaw Hein
သှားတိုကျဆေးနဲ့ မဆေးရဘူးနျော။ အရောငျကသြှားလိမျ့မယျ။ ရှဆေိုတာ အဖိုးတနျပါတယျ။ အမွတျတနိုးနဲ့လညျး ဝတျဆငျကွတယျ၊ စုဆောငျး သိမျးဆညျးကွတယျ။
ဝတျတာမြားလာတဲ့ အခါ ရှထေညျ တှကေ အရောငျ မှိနျသှားရော။ ဆိုငျ သှားပွီး ဆေးခိုငျးမှ ပွနျဝငျးလကျလာတယျလေ။ ဆိုငျမသှားခငျြဘူးဆိုရငျ အိမျမှာပဲ ရှထေညျတှေ သနျ့စငျဆေးကွောလို့ ရပါတယျ။ လှယျလှယျလေး။ ဘာမှမခကျဘူး။ ပွောပွမယျ။
ရနှေေးထဲကို ပနျးကနျဆေးဆပျပွာဆီ အနညျးငယျထညျ့ပါ။ ဆေးမယျ့ရှထေညျကို ဆပျပွာရညျထဲ ၁၅ မိနဈ စိမျပေးထားလိုကျရပါမယျ။ ၁၅ မိနဈ ပွညျ့တော့မှ သှားတိုကျတံအနုလေးနဲ့ ဖွညျးဖွညျးခငျြး ပှတျတိုကျသနျ့စငျပေးပါ။
ရကေိုနှေးအောငျထားထားပွီး ဘုံဘိုငျခေါငျးအောကျမှာ ရှထေညျကို ပွနျဆေးပေးရပါမယျ။ ရထေဲ မစိမျပါနဲ့။
ကပျနတေဲ့ကွေးတှေ ရနေဲ့အတူမြောသှားအောငျ ဘုံဘိုငျခေါငျးကိုဖှငျ့ထားရတာ ဖွဈပါတယျ။ ဇကာထဲကို ရှထေညျပစ်စညျး ထညျ့ပွီး ဆေးရငျ ပွုတျမကတြော့ဘူးပေါ့။
ဆပျပွာရညျတှနေဲ့ ကွေး(ဂြီး)တှေ ပွောငျစငျ သှားပွီဆိုတော့မှ နူးညံ့တဲ့ အဝတျခွောကျလေးနဲ့ အသာအယာ ပှတျတိုကျပွီး ရတှေခွေောကျသှားလိုကျ လုပျလိုကျရမှာ ဖွဈပါတယျ။
ဒါဆိုရငျ ဆိုငျကို တကူးတက သှားစရာ မလိုဘဲနဲ့ ရှထေညျ ပစ်စညျးလေးက ဝယျခါစတုနျးကလို အရောငျပွနျတကျလာတာကို တှရေ့မှာဖွဈပါတယျ။
ဆိုင်ကို တကူးတက သွားစရာမလိုပဲ ရွှေကို အရောင်တင်နည်း
သွားတိုက်ဆေးနဲ့ မဆေးရဘူးနော်။ အရောင်ကျသွားလိမ့်မယ်။ ရွှေဆိုတာ အဖိုးတန်ပါတယ်။ အမြတ်တနိုးနဲ့လည်း ဝတ်ဆင်ကြတယ်၊ စုဆောင်း သိမ်းဆည်းကြတယ်။
ဝတ်တာများလာတဲ့ အခါ ရွှေထည် တွေက အရောင် မှိန်သွားရော။ ဆိုင် သွားပြီး ဆေးခိုင်းမှ ပြန်ဝင်းလက်လာတယ်လေ။ ဆိုင်မသွားချင်ဘူးဆိုရင် အိမ်မှာပဲ ရွှေထည်တွေ သန့်စင်ဆေးကြောလို့ ရပါတယ်။ လွယ်လွယ်လေး။ ဘာမှမခက်ဘူး။ ပြောပြမယ်။
ရေနွေးထဲကို ပန်းကန်ဆေးဆပ်ပြာဆီ အနည်းငယ်ထည့်ပါ။ ဆေးမယ့်ရွှေထည်ကို ဆပ်ပြာရည်ထဲ ၁၅ မိနစ် စိမ်ပေးထားလိုက်ရပါမယ်။ ၁၅ မိနစ် ပြည့်တော့မှ သွားတိုက်တံအနုလေးနဲ့ ဖြည်းဖြည်းချင်း ပွတ်တိုက်သန့်စင်ပေးပါ။
ရေကိုနွေးအောင်ထားထားပြီး ဘုံဘိုင်ခေါင်းအောက်မှာ ရွှေထည်ကို ပြန်ဆေးပေးရပါမယ်။ ရေထဲ မစိမ်ပါနဲ့။
ကပ်နေတဲ့ကြေးတွေ ရေနဲ့အတူမျောသွားအောင် ဘုံဘိုင်ခေါင်းကိုဖွင့်ထားရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဇကာထဲကို ရွှေထည်ပစ္စည်း ထည့်ပြီး ဆေးရင် ပြုတ်မကျတော့ဘူးပေါ့။
ဆပ်ပြာရည်တွေနဲ့ ကြေး(ဂျီး)တွေ ပြောင်စင် သွားပြီဆိုတော့မှ နူးညံ့တဲ့ အဝတ်ခြောက်လေးနဲ့ အသာအယာ ပွတ်တိုက်ပြီး ရေတွေခြောက်သွားလိုက် လုပ်လိုက်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဆိုရင် ဆိုင်ကို တကူးတက သွားစရာ မလိုဘဲနဲ့ ရွှေထည် ပစ္စည်းလေးက ဝယ်ခါစတုန်းကလို အရောင်ပြန်တက်လာတာကို တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
သဲအငျးဂူဆရာတျော ၏ နဂါးပလ်လငျပွနျပျေါလာမညျ့အခြိနျ
August 14, 2020 by Zaw Hein
သဲအငျးဂူဆရာတျောသညျ လူတို့သာမက နဂါးမငျးမြားကပါ ကွညျညိုကွလသေညျ။ထိုကွောငျ့ ဆရာတျော အတှကျပလ်လငျပွုလုပျရနျ အထူးကောငျးမှနျလှသော သဈကနကျပငျမြားဖွငျ့ နဂါး ပလ်လငျ ပွုလုပျရနျ လူတို့အား အိမျမကျပေး ကာနရောပွလသေညျ။ဆရာတျောအတှကျ ပလ်လငျပွု လုပျပွီး၍ တရားဟောသော အခါ နဂါးမြားလညျး လာရောကျနာကွားလသေညျ။
၁၉၇၃ ခုနှဈ ဆရာတျော ခန်ဓာဝနျခသြှားသညျ့အခါနဂါးပလ်လငျလညျး ထူးဆနျးစှာပြောကျဆုံးသှားလသေညျ။ထိုနဂါးပလ်လငျ သညျ ဆရာတျောကိုကွညျညိုသော နဂါးမငျးမြားမှ မိုးကွီးလကွေီး ခစြကော လူသူမရှိသောအခြိနျ ပငျ့ဆောငျသှားလသေညျ။ဆရာတျော ၏ တပညျ့ဒကာမြားက အပူတပွငျးလိုကျရှာကွသျောလညျး မတှရေ့တော့ပေ။
(မှတျခကျြ ။ သဲအငျးဂူဆရာတျောရှိစဉျအခါက ဆရာတျော နဂါးပလ်လငျထကျ ၌တရားဟောနစေဉျ တရှီရှီနှငျ့ မွှသေံကွား ရသဖွငျ့ သဈတောဝနျက နောကျနမေ့နကျတှငျမေးလြောကျလသေဖွငျ့ မိနျ့ကွားလသေညျ ။ဒကာကွီး မနညေ့က နဂါးတှလေညျး လူမမွငျအပျ သောနရောတှငျ တရားလာနာလို့ ကွားရခွငျးဖွဈတယျ။ထိုနောကျ ဆရာတျောက နဂါးမငျး၏ သဒ်ဒါကွောငျ့ နဂါးပလ်လငျ ဖွဈလာသောအကွောငျးမြားနဲ့ ဆရာတျောကွီး မရှိတော့သော အခြိနျတှငျ သူ၏ ပလ်လငျအား နဂါးမြားမှပငျ့ဆောငျသှားမညျအကွောငျးကို မိနျ့ကွားခဲ့သညျ။
ထိုအပွငျ ဆရာတျော ၏ ပလ်လငျ နောကျတဈခေါကျ ပွနျပျေါလာဦးမညျ့ အကွောငျးနှငျ့ထိုတဈခေါကျ ပွနျပျေါပွီးသျော အပွီးတိုငျပြောကျသှားမညျ့ အကွောငျးကို ဆရာတျောက ခန်ဓာဝနျခဖြို့ တဈလအလိုတှငျ သဈတောဝနျအား မိနျ့ကွားခဲ့လသေညျ။ဤအကွောငျးအားသဈတောဝနျက မဟာဝိဇ်ဇာကမျြးတှငျ ထညျ့သှငျးပွုစုခဲ့သညျ။သဈတောဝနျလညျး ၁၉၉၅ တှငျ ကှယျလှနျလသေညျ။ ရဟန်တာပုဂ်ဂိုလျတို့၏ မိနျ့ကွားသောအရာတိုငျး မလှဲဧကနျသာရှိသညျ)
သဲအငျးဂူဆရာတျော သညျ သူ၏နဂါးပလ်လငျ တဖနျပွနျလညျထှကျပျေါ လာမညျ့အခြိနျကို သဈတောဝနျအား ဤကဲ့သို့ မိနျ့ကွားခဲ့လသေညျ။ သာသနာနှဈ ၂၆၀၀ ပွညျ့ခါနီးရငျ မွနျမာပွညျမှာ သာသနာပွုမငျး ပျေါလိမျ့မယျ။အဲဒီမငျးနှငျ့ အတူ အလှနျဘုနျးကွီးတဲ့ ရဟန်တာဆရာတျော တဈပါးလညျး ပျေါလာမယျ။ အဲဒီမငျးခတျေမှာ ဗုဒ်ဓသာသနာဟာ အရမျးထှနျးကားသလို အဲဒီဆရာတျောဟာလညျး လူနတျ နဂါးတို့က အလှနျကွညျညိုကွမယျ။
နဂါးတှကေလညျး ကွညျညိုလှနျးအားကွီးလို့ ဆရာတျောရဲ့ နဂါးပလ်လငျကို ပွနျပူဇျောကွလိမျ့မယျ။ပူဇျောမယျ့အခြိနျမှာ မိုးကွီးလကွေီးခပြွီး အဲဒီဆရာတျောကြောငျးရှမှေ့ာ အသငျ့ရောကျနမေယျ။သာသနာပွုမငျးရဲ့ဘုနျးကံဆရာတျောရဲ့ဘုနျးကံကွောငျ့ နတျတှေ နဂါးတှေ ဝိဇ်ဇာလောက ကပုဂ်ဂိုလျတှေ ပါ မွတျဗုဒ်ဓရဲ့ သာသနာတျောအတှကျ အစှမျးကုနျ ဝိုငျးမကွလိမျ့မယျ။သာသနာပှဲ ဝငျရောကျနှဲကွလိမျ့မယျ။
သာသနာပွု မငျးအတှကျ ရိုးမသဈတောမြားထဲမှ ထုံးကဲ့သို့ဖွူစငျသော ဆငျဖွူတျော ခုနှဈစီးပျေါထှကျလာမယျ။ထိုမငျးခတျေမှာ ပညာတတျတှေ လူတျောတှေ လူစှမျးကောငျးတှေ ကြောကျသံ ပတ်တမွားတှေ အမြားကွီးထှကျလာမယျ။သာသနာပွုမငျး ကှယျလှနျသျော ပွညျသူမြားက ဆငျဖွူ ခုနှဈစီးနှငျ့တငျဆောငျကာ သဂွိုလျကွလိမျ့မယျ။သာသနာပွုမငျး ကှယျလှနျပွီး နောကျတဈနှဈမှာ ရဟန်တာဆရာတျောလညျး နဂါးပလ်လငျထကျမှာ ပရိနိဗ်ဗာနျပွုလိမျ့မယျ။
ထိုအခြိနျမှာ မိုးကွီးလကွေီးခကြာ နဂါးမြားက နဂါးပလ်လငျကို အပွီးတိုငျ ပွနျပငျ့ဆောငျသှားကွလိမျ့မယျ။ပွနျမပျေါလာတော့ပါ။သို့သျော ဗုဒ်ဓသာသနာက ဆကျလကျထှနျးကားနမေညျဖွဈပွီး သာသနာပွုမငျး ၏ သားတျောတဈပါးမှ အဖေ၏တာဝနျအားဆကျလကျထမျးဆောငျလိမျ့မညျ။
(မဟာဝိဇ်ဇာကမျြး စာမကျြနှာ ၁၀၁ နှငျ့ ၁၀၂ မှ ကူးယူဖျောပွသညျ)
သဲအင်းဂူဆရာတော်သည် လူတို့သာမက နဂါးမင်းများကပါ ကြည်ညိုကြလေသည်။ထိုကြောင့် ဆရာတော် အတွက်ပလ္လင်ပြုလုပ်ရန် အထူးကောင်းမွန်လှသော သစ်ကနက်ပင်များဖြင့် နဂါး ပလ္လင် ပြုလုပ်ရန် လူတို့အား အိမ်မက်ပေး ကာနေရာပြလေသည်။ဆရာတော်အတွက် ပလ္လင်ပြု လုပ်ပြီး၍ တရားဟောသော အခါ နဂါးများလည်း လာရောက်နာကြားလေသည်။
၁၉၇၃ ခုနှစ် ဆရာတော် ခန္ဓာဝန်ချသွားသည့်အခါနဂါးပလ္လင်လည်း ထူးဆန်းစွာပျောက်ဆုံးသွားလေသည်။ထိုနဂါးပလ္လင် သည် ဆရာတော်ကိုကြည်ညိုသော နဂါးမင်းများမှ မိုးကြီးလေကြီး ချစေကာ လူသူမရှိသောအချိန် ပင့်ဆောင်သွားလေသည်။ဆရာတော် ၏ တပည့်ဒကာများက အပူတပြင်းလိုက်ရှာကြသော်လည်း မတွေ့ရတော့ပေ။
(မှတ်ချက် ။ သဲအင်းဂူဆရာတော်ရှိစဉ်အခါက ဆရာတော် နဂါးပလ္လင်ထက် ၌တရားဟောနေစဉ် တရွီရွီနှင့် မြွေသံကြား ရသဖြင့် သစ်တောဝန်က နောက်နေ့မနက်တွင်မေးလျောက်လေသဖြင့် မိန့်ကြားလေသည် ။ဒကာကြီး မနေ့ညက နဂါးတွေလည်း လူမမြင်အပ် သောနေရာတွင် တရားလာနာလို့ ကြားရခြင်းဖြစ်တယ်။ထိုနောက် ဆရာတော်က နဂါးမင်း၏ သဒ္ဒါကြောင့် နဂါးပလ္လင် ဖြစ်လာသောအကြောင်းများနဲ့ ဆရာတော်ကြီး မရှိတော့သော အချိန်တွင် သူ၏ ပလ္လင်အား နဂါးများမှပင့်ဆောင်သွားမည်အကြောင်းကို မိန့်ကြားခဲ့သည်။
ထိုအပြင် ဆရာတော် ၏ ပလ္လင် နောက်တစ်ခေါက် ပြန်ပေါ်လာဦးမည့် အကြောင်းနှင့်ထိုတစ်ခေါက် ပြန်ပေါ်ပြီးသော် အပြီးတိုင်ပျောက်သွားမည့် အကြောင်းကို ဆရာတော်က ခန္ဓာဝန်ချဖို့ တစ်လအလိုတွင် သစ်တောဝန်အား မိန့်ကြားခဲ့လေသည်။ဤအကြောင်းအားသစ်တောဝန်က မဟာဝိဇ္ဇာကျမ်းတွင် ထည့်သွင်းပြုစုခဲ့သည်။သစ်တောဝန်လည်း ၁၉၉၅ တွင် ကွယ်လွန်လေသည်။ ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တို့၏ မိန့်ကြားသောအရာတိုင်း မလွဲဧကန်သာရှိသည်)
သဲအင်းဂူဆရာတော် သည် သူ၏နဂါးပလ္လင် တဖန်ပြန်လည်ထွက်ပေါ် လာမည့်အချိန်ကို သစ်တောဝန်အား ဤကဲ့သို့ မိန့်ကြားခဲ့လေသည်။ သာသနာနှစ် ၂၆၀၀ ပြည့်ခါနီးရင် မြန်မာပြည်မှာ သာသနာပြုမင်း ပေါ်လိမ့်မယ်။အဲဒီမင်းနှင့် အတူ အလွန်ဘုန်းကြီးတဲ့ ရဟန္တာဆရာတော် တစ်ပါးလည်း ပေါ်လာမယ်။ အဲဒီမင်းခေတ်မှာ ဗုဒ္ဓသာသနာဟာ အရမ်းထွန်းကားသလို အဲဒီဆရာတော်ဟာလည်း လူနတ် နဂါးတို့က အလွန်ကြည်ညိုကြမယ်။
နဂါးတွေကလည်း ကြည်ညိုလွန်းအားကြီးလို့ ဆရာတော်ရဲ့ နဂါးပလ္လင်ကို ပြန်ပူဇော်ကြလိမ့်မယ်။ပူဇော်မယ့်အချိန်မှာ မိုးကြီးလေကြီးချပြီး အဲဒီဆရာတော်ကျောင်းရှေ့မှာ အသင့်ရောက်နေမယ်။သာသနာပြုမင်းရဲ့ဘုန်းကံဆရာတော်ရဲ့ဘုန်းကံကြောင့် နတ်တွေ နဂါးတွေ ဝိဇ္ဇာလောက ကပုဂ္ဂိုလ်တွေ ပါ မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ သာသနာတော်အတွက် အစွမ်းကုန် ဝိုင်းမကြလိမ့်မယ်။သာသနာပွဲ ဝင်ရောက်နွဲကြလိမ့်မယ်။
သာသနာပြု မင်းအတွက် ရိုးမသစ်တောများထဲမှ ထုံးကဲ့သို့ဖြူစင်သော ဆင်ဖြူတော် ခုနှစ်စီးပေါ်ထွက်လာမယ်။ထိုမင်းခေတ်မှာ ပညာတတ်တွေ လူတော်တွေ လူစွမ်းကောင်းတွေ ကျောက်သံ ပတ္တမြားတွေ အများကြီးထွက်လာမယ်။သာသနာပြုမင်း ကွယ်လွန်သော် ပြည်သူများက ဆင်ဖြူ ခုနှစ်စီးနှင့်တင်ဆောင်ကာ သဂြိုလ်ကြလိမ့်မယ်။သာသနာပြုမင်း ကွယ်လွန်ပြီး နောက်တစ်နှစ်မှာ ရဟန္တာဆရာတော်လည်း နဂါးပလ္လင်ထက်မှာ ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုလိမ့်မယ်။
ထိုအချိန်မှာ မိုးကြီးလေကြီးချကာ နဂါးများက နဂါးပလ္လင်ကို အပြီးတိုင် ပြန်ပင့်ဆောင်သွားကြလိမ့်မယ်။ပြန်မပေါ်လာတော့ပါ။သို့သော် ဗုဒ္ဓသာသနာက ဆက်လက်ထွန်းကားနေမည်ဖြစ်ပြီး သာသနာပြုမင်း ၏ သားတော်တစ်ပါးမှ အဖေ၏တာဝန်အားဆက်လက်ထမ်းဆောင်လိမ့်မည်။
(မဟာဝိဇ္ဇာကျမ်း စာမျက်နှာ ၁၀၁ နှင့် ၁၀၂ မှ ကူးယူဖော်ပြသည်)
August 12, 2020 by Zaw Hein
အိပျနစေဉျအတှငျး အမွငျ့တဈခုခုပျေါကပွုတျကသြလို၊ ခြျောလဲသလိုမြိုးကွောငျ့ ခန်ဓာကိုယျဆတျခနဲတုနျတကျလာရတဲ့ ခံစားခကျြမြိုးကို ကြှနျတျောတို့အားလုံး ကွုံဖူးကွပါလိမျ့မယျ။
ဒီလိုမြိုးတှခေဏ၊ ခဏဖွဈတာ ဘာကွောငျ့လဲဆိုတဲ့အဖွကေို ဒီဆောငျးပါးလေးကနတေဈဆငျ့ စာဖတျပရိတျတို့နားလညျသိရှိရအောငျ ရှငျးပွပေးသှားပါ့မယျ။
တျောတျောမြားမြားက တဈခုခုနဲ့တိုကျမိသလို၊ တဈစုံတဈယောကျကရိုကျလိုကျသလိုမြိုးနဲ့ တဈနရောရာက ပွုတျကသြလိုမြိုးကွောငျ့ အိပျနရေငျးဆတျခနဲ တုနျသှားတတျကွပမေဲ့
တခြို့တလကေတော့ တဈယောကျယောကျက တကျဖိထားသလို၊ ညှဈထားသလိုမြိုးကွောငျ့ တုနျတတျကွပါတယျ။
အိုခေ … ဒီလိုဆိုရငျ ဘာကွောငျ့အိပျနရေငျးနဲ့ အမွငျ့တဈနရောပျေါကနေ ပွုတျကသြလိုခံစားရတာလဲဆိုတဲ့ ခေါငျးစဉျဆီကို ပွနျသှားလိုကျကွရအောငျပါ။
ပငျပနျးမှုတှေ၊ စိတျဖိစီးမှုတှေ၊ စိုးရိမျကွောငျ့ကွမှုတှနေဲ့ အိပျစကျလိုကျတဲ့အခါ ခန်ဓာကိုယျကအိပျစကျသှားပမေဲ့ ဦးနှောကျကတော့ တကယျတမျးမအိပျစကျသေးပါဘူး။
ဒီအခြိနျမြိုးမှာ ဦးနှောကျက အိပျစကျနတေဲ့ခန်ဓာကိုယျကို နိုးထဖို့ အခကျြပွသတိပေးခွငျးပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဦးနှောကျက ခန်ဓာကိုယျကို မွနျမွနျနိုးထစဖေို့ရာ အိမျမကျအနနေဲ့ ဖနျတီးသတိပေးလိုကျတာမြိုးလညျး ဖွဈပါတယျ။
အိပ်နေစဉ်အတွင်း အမြင့်တစ်ခုခုပေါ်ကပြုတ်ကျသလို၊ ချော်လဲသလိုမျိုးကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်ဆတ်ခနဲတုန်တက်လာရတဲ့ ခံစားချက်မျိုးကို ကျွန်တော်တို့အားလုံး ကြုံဖူးကြပါလိမ့်မယ်။
ဒီလိုမျိုးတွေခဏ၊ ခဏဖြစ်တာ ဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့အဖြေကို ဒီဆောင်းပါးလေးကနေတစ်ဆင့် စာဖတ်ပရိတ်တို့နားလည်သိရှိရအောင် ရှင်းပြပေးသွားပါ့မယ်။
တော်တော်များများက တစ်ခုခုနဲ့တိုက်မိသလို၊ တစ်စုံတစ်ယောက်ကရိုက်လိုက်သလိုမျိုးနဲ့ တစ်နေရာရာက ပြုတ်ကျသလိုမျိုးကြောင့် အိပ်နေရင်းဆတ်ခနဲ တုန်သွားတတ်ကြပေမဲ့
တချို့တလေကတော့ တစ်ယောက်ယောက်က တက်ဖိထားသလို၊ ညှစ်ထားသလိုမျိုးကြောင့် တုန်တတ်ကြပါတယ်။
သင်ဟာ ဒီလိုမျိုး မကြာခဏဖြစ်တတ်သူဆိုရင်တော့ ကဖင်းဓာတ်နဲ့ ဆေးလိပ်တွေသုံးစွဲခြင်းကို အမှန်တကယ်ကို လျော့ချသင့်ပါပြီ။ ဒါ့အပြင် ၎င်းဓာတ်နှစ်မျိုးဟာ သင့်ရဲ့အိပ်စက်မှုတွေကိုပါ ထိခိုက်လာစေနိုင်ပါတယ်။
အိုခေ … ဒီလိုဆိုရင် ဘာကြောင့်အိပ်နေရင်းနဲ့ အမြင့်တစ်နေရာပေါ်ကနေ ပြုတ်ကျသလိုခံစားရတာလဲဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်ဆီကို ပြန်သွားလိုက်ကြရအောင်ပါ။
ပင်ပန်းမှုတွေ၊ စိတ်ဖိစီးမှုတွေ၊ စိုးရိမ်ကြောင့်ကြမှုတွေနဲ့ အိပ်စက်လိုက်တဲ့အခါ ခန္ဓာကိုယ်ကအိပ်စက်သွားပေမဲ့ ဦးနှောက်ကတော့ တကယ်တမ်းမအိပ်စက်သေးပါဘူး။
ဒီအချိန်မျိုးမှာ ဦးနှောက်က အိပ်စက်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကို နိုးထဖို့ အချက်ပြသတိပေးခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဦးနှောက်က ခန္ဓာကိုယ်ကို မြန်မြန်နိုးထစေဖို့ရာ အိမ်မက်အနေနဲ့ ဖန်တီးသတိပေးလိုက်တာမျိုးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။